04/29/13 ~ Myanmar Forward
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများနှင့်ပတ်သက်၍ လူပေါင်း ၂ ထောင်ကျော်အား ကွင်းဆင်း မေးမြန်းချက် များ အပေါ် အခြေခံသည့် အစီရင်ခံစာကို ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်က အများပြည် သူသို့ ယနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ယင်း ထုတ်ပြန် ချက်တွင် နိုင်ငံသားဖြစ်ပိုင်ခွင့်ကိစ္စ၊ ယာယီနေရာချထားရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးများ၊ နယ်စပ် ပိုင်နက် လုံခြုံရေးနှင့် လူဦးရေ ပြန့်ပွားမှုနှုန်းမြင့်မားသည့် ကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ အကြံပြု ချက်များ အပါ အ၀င် အခန်း ၁၄ ခန်းနှင့် စာမျက်နှာ ၁၃၈ မျက်နှာ ပါရှိသည်။
လူပေါင်း ၁သိန်းကျော် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ကာ ဒုက္ခသည်များဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ခက်ခဲမှု များကြောင့် မိသားစု စားဝတ် နေရေးများ ထိခိုက်မှုရှိနေကြောင်း၊ အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးသူငယ်များ စိတ်ပိုင်း ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများ တိုးပွားလာနေကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အတူ လူမျိုးစု တစ်စုနှင့် တစ်စု အကြား မယုံကြည်မှုများတိုးပွားလာနေခြင်း၊ ဆက်ဆံရေး ပြတ်တောက် ခြင်းနှင့် တင်းမာ မှုများမြင့် တက်နေခြင်း များလည်း ဖြစ်ပေါ်နေရာ ယင်းကိစ္စရပ်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေ ရှင်းနိုင်ရန် အတွက် လုံခြုံရေးတပ်အင်အားများ ရုတ်တရက် များပြားစွာ လျှော့ချခြင်းမပြုရန်၊ တပ်မတော်ရေ တပ် အင်အားတိုးချဲ့ချထားရန်၊ ကမ်းခြေစောင့် ရေဒါစခန်းများ၊ ကင်းလှည့်ရေယာဉ်များ၊ CCTV စောင့်ကြည့်ရေး ကင်မရာများ၊ လူလုပ် အတားအဆီးများချထားရန် စသည့်အချက်များ ပါဝင်သည့် အကြံပြု ချက် ၁၆ ချက်ကိုလည်း အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။
ထို့ပြင် လ.၀.က ၀န်ထမ်းများနှင့် ပတ်သက်သည့်အချက်များ၊ စစ်ဘက် အရပ်ဘက် ထောက်လှမ်းရေးများ ပါဝင် သည့် အထူးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရေး ဆိုင်ရာအချက်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာ လိုအပ် ချက်များ၊ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြံပြုချက်များလည်း ပါဝင်သည်။
ကလေး သူငယ် များ၏ အာဟာရ ချို့တဲ့မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာနှင့် စာတတ်မြောက်မှုနှုန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် များကိုလည်း သီးခြားထည့်သွင်း အကြံပြုထားသည်။
ယင်း အစီရင် ခံစာတွင် ပါဝင်သည့် တွေ့ရှိချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များကို ဆက်လက် အကောင် အထည်ဖော် ရန် နိုင်ငံတော် သမ္မတ အမိန့် ဖြင့် ၂၀၁၂ နှစ်ကုန်ပိုင်းက ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကော်မတီခွဲ ၇ ခုက တာဝန် ဆက်လက် ယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ဦးကိုကိုကြီးက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောဆိုသည်။
“အခု ကျနော်တို့ ရင်ဆိုင်နေရတာတွေက လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ စုနှစ်များစွာကတည်းက ပြဿနာဟောင်းတွေပါ။ ကျနော် တို့က ဒုက္ခသည်တွေ အမိုးအကာနဲ့ အစားအစာရရှိရေးအတွက်ကို အဓိကထား စဉ်းစားမယ်။ လူသား တယောက် အသက်ရှင် ရပ်တည်နိုင်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလေးအနက်ထား စဉ်းစားသွားမယ်” ဟု ဦးကို ကိုကြီး က ပြောသည်။
ယင်းအစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြချက်အရ ၂၀၁၂ခုနှစ် ပဋိပက္ခများအတွင်း လူပေါင်း ၁၉၂ ဦး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး ၂၆၅ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာ နေအိမ်ပေါင်း ၈၆၁၄ လုံး ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းအစီရင်ခံစာတွင် ရခိုင်နှင့် ဘင်္ဂါလီဟု သုံးစွဲထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ တွင်း နေထိုင်လျှက်ရှိသည့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံသားဖြစ်သင့်သူများကို နိုင်ငံ သားဖြစ်ရေးနှင့် မဖြစ်သင့်သူများကိုလည်း နိုင်ငံတကာ သဘောတူညီချက်များနှင့်အညီ ဆက် လက်ဆောင် ရွက် သင့်ကြောင်း စုံစမ်းရေးကော်မရှင်က အကြံပြုထားသည်။
ယင်း အချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဦးကိုကိုကြီးက“နိုင်ငံသားဆိုရင် နိုင်ငံအပေါ်မှာ သစ္စာစောင့်သိဖို့ လိုအပ်တဲ့ အကြောင်း တွေကို နိုင်ငံသား လျှောက် ထား သူတွေ လေးလေးနက်နက် လက်ခံ လာအောင် အများကြီး လုပ်ဖို့ လို အပ်တယ်။ အစိုးရကလည်း နိုင်ငံသားအားလုံးကို နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး တန်းတူပေးဖို့ လိုအပ် တယ်။ ဒါမှ လစ်ဘရယ် ဖြစ်လာမယ်၊ နိုင်ငံအပေါ် သစ္စာစောင့် သိမှုတွေရှိလာမယ်။ လူမျိုးစုတွေကြားမှာ သဟဇာ တ ဖြစ်မှုတွေရှိလာမယ်” ဟု ဆက်လက်ပြောသည်။
ယင်း အစီရင် ခံစာကို အဖွဲ့ဝင် ၂၅ ဦးပါဝင်သည့် ကော်မရှင်အဖွဲ့က ၇ လကြာ စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ယနေ့ အများပြည် သူသို့ မီဒီယာများတဆင့် ယနေ့ထပ်မံထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ အာရှရေးရာ လက်ထောက် ဒါရိုက် တာ ဖေလ်ရောဘတ်ဆန်ကမူ ယခု အစီရင်ခံစာတွင် “ယမန်နှစ် ဇွန်လနဲ့ အောက်တိုဘာလမှာ ဖြစ်ပွား ခဲ့တဲ့ လူသားထုအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုနဲ့ လူမျိုးတုန်း သန့်စင်မှုတွေအတွက် တာဝန်ခံဖို့ လိုအပ် တာကို ထောက်ပြပြောဆိုမှုတွေ မပါဝင်ဘူး” ဟု ပြောဆိုကြောင်း အေပီသတင်းတပုဒ်က ရေးသား ထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် အပတ် အဆိုပါ အဖွဲ့က ယမန်နှစ်အတွင်း ရခိုင်ပြည်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော သွေးစွန်းသော အဓိ ကရုဏ်းနှင့် အစုအပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုများကို လူသားမဆန်သော ရာဇ၀တ်မှုများအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပြီး မြန်မာ အာဏာ ပိုင်များနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးများက ရခိုင်ပြည်ရှိ မွတ်စလင်များကို “လူမျိုး တုန်းသန့်စင်ရေး” လုပ်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။
ကလေးသူငယ်များ၏ အာဟာရ ချို့တဲ့မှု၊ စာတတ်မြောက်မှု များကိုလည်း သီးခြားထည့်သွင်း အကြံပြု ထားသည် (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေးအတွက် ဒေသခံတွေက ဒီနေ့ ထပ်မံ ဆန္ဒဖော် ထုတ်ခဲ့ ပါ တယ်။
ကြေးနီ စီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေးအတွက် လက်ပန်းတောင်းတောင် အနီးက ဆည်တဲ၊ ဇီးတော၊ အလယ်ရွာ၊ အလယ်တော၊ ရွာသစ်ရွာနဲ့ မိုးကြိုးပြင်ရွာက ဒေသခံ ၅၀၀ လောက်က အစိုးရထံကနေ ခွင့်ပြုချက်ရယူ လမ်းလျှောက် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဆန္ဒပြရာမှာပါဝင်တဲ့ အလယ်တောရွာက ဒေါ်စန္ဒာက “လက်ပန်းတောင်းကြေးနီစီမံကိန်းလုံးဝ ဖျက်သိမ်း ရေး၊ ပုဒ်မ ၁၄၄ ဖျက်သိမ်းရေး၊ မီးလောင်ဗုံးတရားခံများ အမြန်ဆုံးအရေးယူဖော်ထုတ်ပေးရေး၊ ကြေးနီ စီမံကိန်း အတွက် အသစ်ပြင် ဆင်ချုပ် ဆိုမယ့် စာချုပ်အလိုမရှိ၊ လျော်ကြေးမယူတဲ့ လယ်ယာမြေ များပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အဆောက် အအုံနဲ့ စွန့်ပ စ်ပစ္စည်းများကို အမြန်ဆုံးဖယ်ရှားပေးရေး၊ ကျွန်ဇာတ် လာခင်း မယ့် ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ အလိုမရှိ၊ တိုင်းပြည်ကို လက်ညှိုးထိုးရောင်းစားနေတဲ့ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီအလိုမရှိဆိုတဲ့ ကြွေးကြော် သံ ၇ ရပ်နဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတယ်” လို့ ပြောပြပါတယ်။
အရင်ရက်ပိုင်းက လက်ပန်းတောင်းတောင်အနီး ထွန်တုံးတိုက်ပွဲတွေကို ဒေသခံတွေက ဆင်နွှဲခဲ့ပြီး လုံခြုံ ရေး တပ်ဖွဲ့ တွေနဲ့ အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီအတွက် ဒေသခံတွေကို ဖမ်းဆီးတာတွေ ရှိခဲ့သလို လက်ပန်းတောင်းတောင် စီမံကိန်း ဒေသအတွင်းမှာ မတည် မငြိမ်ဖြစ်အောင် ဆူပူလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ စွပ်စွဲပြီး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ၈ ဦးကို စစ်ကိုင်းတိုင်း ရဲတပ် ဖွဲ့က ဧပြီ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ဖမ်းဆီးမိန့် ထုတ်ပြန်လုိုက်ပါတယ်။
ဒီလို ၀ရမ်း ထုတ်လိုက်တဲ့ အပေါ်ကို ဒေါ်စန္ဒာက သူ့အမြင်ကို ခုလိုပြောပါတယ်။
“၀ရမ်းထုတ်ခဲ့ရသူတွေကို ဒေသခံတွေက ကာကွယ်မှာပါ။ သူတို့ ကြေးနီစီမံကိန်းဆက်လုပ်နိုင်ဖို့။ ၀ရမ်း ထုတ်ခံ ထားရတဲ့ ပွင့်လင်းအဖွဲ့ကလူတွေဟာ ဒေသခံတွေကို ကူညီပေးနေသူတွေဖြစ်လို့ ကျမတို့ကို ဆက်အ ကူ အညီမပေးနိုင်အောင် ၀ရမ်းထုတ်တာပဲ။”
ညနေပိုင်းမှာ လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းဒေသက ရွာသား ၅၀၀ လောက်ဟာ တရားဝင် ခွင့်ပြုချက် အရ စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းရေးဆန္ဒပြပွဲကို ဒီနေ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ညောင်ပင်ကြီးရဲစခန်းကို သွား ရောက်ပြီး သူတို့တတွေကို ဖမ်းဆီးဖို့ အဖမ်းခံကြပါတယ်။
ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဆန္ဒပြပွဲမှာ သတင်းသွားယူနေတဲ့ ဒီဗွီဘီသတင်းထောက် ဒေါ်တင်မာဆွေ ပြောပြတာက
“ညောင်ပင်ကြီးရဲစခန်းကိုရောက်တော့ ရွာသား ၅၀၀ လောက်က သူတို့တွေဟာ ဟန်ဝင်းအောင်တို့ကို လက်သင့်ခံ ထားတယ်၊ ထမင်းလည်းပို့တယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ကို အရေးယူပါ၊ ဖမ်းပါပြောတော့. စခန်းမှူး က အဲလိုဖမ်းလို့မရဘူး၊ တရားခံတွေကို လာအပ်ပါလို့ပြောတော့ ရွာသားတွေက တရားခံတွေမဟုတ်လို့ လာမ အပ်နိုင် ဘူးလို့ ပြန်ပြောတယ်။ ၀မ်ပေါင်ဘက်ကိုသွားမလို့လုပ်နေတုန်းမှာ ရဲတွေကအင်အားသုံးပြီး ပြန်ခိုင်း တယ်၊ ၀မ်ပေါင်ဘက် မရောက်သေးဘူး။”
ရန်ကုန်မြို့ မဟာဗန္ဓုလ ပန်းခြံ ရှေ့မှာလည်း ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကွန်ရက်က ဦးဆောင်ပြီး ကြေးနီစီမံ ကိန်း လှုပ်ရှား မှုကြောင့် ဖမ်းဆီးထားသူတွေ ပြန်လွှတ်ပေးရေး၊ တောင်သူလယ်သမားတွေနဲ့ ပြည်သူ့ အကျိုး ဆောင် ကွန်ရက်ဝင် အသီးသီးတို့ကို ၀ရမ်းထုတ်ထားတဲ့အပေါ် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီဗွီဘီ၊ ဧပြီ ၂၉၊ ၂၀၁၃
ဆည်တည်းရွာ ဆန္ဒပြမှု ဦးဆောင်သူ ၃ ဦးကို အမှုဖွင့်လိုက်ပြီ
လက်ပန်းတောင်းတောင် စီမံကိန်း လယ်မြေများကို ရောင်းချ ပေါင်နှံခြင်းမပြုရ ဆိုသည့် စာများကို ယင်းဒေ သရှိ အိမ်တိုင်းတွင် ဤသို့ ကပ်ထားသည် (ဓာတ်ပုံ – မန်းသားလေး / ဧရာဝတီ)
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဆည်တည်း ကျေးရွာတွင် ဆန္ဒပြရာ၌ ဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူ ၃ ဦးကို အမှုဖွင့်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိ နေသော ပါဝင်ဦးဆောင်သူ များကိုလည်း ဥပဒေနှင့်အညီ ဆက်လက် ဖမ်းဆီးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆားလင်းကြီး ရဲစခန်းမှ သိရသည်။
ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားသည့် မြေနေရာအတွင်း ဒေသခံများက ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ဝင်ရောက် ထွန် ယက် စိုက် ပျိုးမှု ပြုလုပ် ခဲ့ပြီး အကြမ်း ဖက်မှုများ ပြုလုပ်သည် ဆိုသည့် စွပ်စွဲမှုများနှင့် ဆားလင်း ကြီးမြို့နယ် ရဲစခန်း မှ တရားခံဟု ယူဆရသူ ၃ ဦးကို အမှုပေါင်း ၄ ခုနှင့် အမှုဖွင့်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဖမ်းဆီး ခံရသည့်အထဲတွင် ရန်ကုန် ပြည်သူ့ အကျိုးဆောင်ကွန်ရက်မှ ကိုအောင်စိုးနှင့် ရွာသားနှစ်ဦး ပါဝင် သည်။
၎င်းတို့ကို ပုဒ်မ ၃၃၃ (တာဝန်ဝတ္တရား ဆောင်ရွက်နေသော ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကို နာကျင်စေမှု)၊ ၄၄၇ (စီမံကိန်း ဧရိယာအတွင်း ကျော်နင်းမှု)၊ ၁၄၃ (ဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သည့် စုဝေးမှု)၊ ၃၄ (အကြံအစည် တခု ကို အထမြောက်စေရန် တဦးထက်ပိုသော လူများ စုဝေးမှု) စသည့် အမှုများနှင့် ဆားလင်းကြီး တရားရုံး တွင် အမှုဖွင့် ထားကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် လက်ပန်းတောင်း လယ်မြေကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး စီမံကိန်းဒေသအတွင်း မတည်ငြိမ်မှုများ ဖြစ်စေ ရန် နောက် ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်စေခိုင်းသူဟု ရဲဌာနက သတ်မှတ်သူ ၈ ဦးကို ဖမ်းဆီးအရေးယူရန် စစ်ကိုင်း တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဝရမ်းထုတ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ၁ ဦးကို ဖမ်းဆီးထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
“ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ထားတဲ့ တရားခံတွေကို ဖမ်းမိဖို့အတွက် ကျနော်တို့ တရားဥပဒေနဲ့ အညီ ၀င်ရောက် ရှာဖွေ ဖမ်းဆီး ဆောင်ရွက် သွားမှာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ်း ဖြစ်စဉ်တုန်းကလည်း ဒေသခံ လယ် သမား တွေက တားမြစ် ထားတဲ့ မြေနေရာကို ကျူးကျော် ၀င်ရောက် ခဲ့ကြတယ်။ ဒါကို ကျနော်က သုံးကြိမ်သုံးခါ အော်ပြီး တားမြစ် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်” ဟု မုံရွာခရိုင်ရဲမှူး ဦးတင်ထွန်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဆက်လက်၍ ၎င်းက တားမြစ်သည့်သဘော အော်ပြောနေချိန်တွင်ပင် ပြည်သူ့အကျိုးဆောင် ကွန်ရက်မှ ကိုအောင် စိုးက ဒေသခံ လယ်သမားများအား ရဲမှူးစကား နားမထောင်ဘဲ ရှေ့ကို ဆက်တိုးရန် နောက်မှ ပြောဆို သဖြင့် လယ်သမားများနှင့် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။
“ရဲမှူးစကား နားမထောင်နဲ့ ဆက်တိုးဆိုပြီး အောင်စိုးက နောက်ကနေ ပြောလို့ မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်ခဲ့ရ တာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကျနော်တို့က အောင်စိုးကို ၀င်ဖမ်းရတာပါ” ဟု သူက ပြောသည်
၂၅ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အဓိကရုဏ်းအသွင် ဆောင်သော ဖြစ်စဉ်မှာ ကိုအောင်စိုးကို ၀င်ရောက် ဖမ်းဆီး သဖြင့် ဒေသခံများက လက်မခံဘဲ ကိုအောင်စိုးကို ပြန်လည်ဆွဲခေါ်ရာမှ နှစ်ဘက် တင်းမာမှုများ ဖြစ်ပေါ် ကာ နှစ်ဘက်စလုံး ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိမှုများ ပြင်းထန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောကြ သည်။
ဖမ်းဝရမ်း ထုတ် ခံရ သည့် အကျိုးဆောင်များ အပေါ် ရဲများ၏ လုပ်ဆောင်မှုကို ဆည်တည်းရွာမှ ရွာခံများ က လက်မခံကြပေ။
“ကျမတို့က ဥပဒေကို နားမလည်ဘူး။ သူတို့က ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းရာတွေကို ကျမတို့ကို ရှင်း ပြနိုင် တယ်။ ဒေသခံတွေက ကိုယ်တိုင်မပါဘဲ ကျမတို့ကို ဘယ်သူကမှ မြှောက်ပေးလို့ မရပါဘူး။ ကျမတို့ ဒေသခံ တွေနဲ့ ဒီ အဖွဲ့စည်းတွေက စိတ်ထပ်တူညီမျှ ခံစားချက်ခြင်း တူလို့ ဒီလို လုပ်ဆောင်ကြတာပါ” ဟု ဆည် တည်း ရွာသူ မ၀င်းဝင်းဌေးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ပြည်သူ့ အကျိုးဆောင် ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တခြားအဖွဲ့စည်းများမှ ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ထားသူများကို ဆည် တည်းရွာ အတွင်း ၀င်ရောက် ဖမ်းဆီးခြင်းများ ဆောင်ရွက်မည် ဆိုသောကြောင့် ရွာတွင် ကင်းများ ချထား ကြောင်း ပြည်သူ့ အကျိုးဆောင် ကွန်ယက်မှ ကိုဗထူးက ဆိုသည်။
ဆည်တည်းကျေးရွာရှိ ဒေသခံများက ၎င်းတို့ လျော်ကြေးမယူခဲ့သည့် လယ်မြေများတွင် ဧပြီ ၂၅ ရက်နေ့က ဝင်ရောက် ထွန်ယက်ရာမှ ရဲများက အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေသခံများထံ ရောက် ရှိနေသည့် ရန်ကုန် ပြည်သူ့ အကျိုးဆောင် ကွန်ရက်မှ ကိုအောင်စိုးကို ၀င်ရောက် ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ် ကြောင်း၊ ဒေသခံ လယ်သမားများနှင့် အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ရာတွင်လည်း ဒေသခံများကို မီးခိုး ဗုံးများ၊ သေနတ်များ၊ ရာဘာဒုတ်၊ ဒိုင်းများ သုံး၍ ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေသခံများ ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ပြင်းထန် ခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။
အဆိုပါ အဓိကရုဏ်း ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ဒေသခံ ၂၀ ထက်မနည်း ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပြီး ၃ ဦး အတွင်းလူနာဖြစ် ဆေးကု သမှု ခံယူခဲ့ရသည်။ ဒေသခံတဦးမှာ လက်မောင်းတွင် သေနတ်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပြီး မုံရွာဆေးရုံတွင် ဆေးကု သမှု ခံယူလျှက် ရှိသည်။ရဲများဘက်တွင်လည်း ၁၅ ဦး ဒဏ်ရာရရှိကာ ၃ ဦးမှာ ဆားလင်း ကြီးမြို့နယ် ရဲစခန်းတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူလျှက် ရှိသည်။
ဒဏ်ရာရရှိသည့် ရဲ ၃ ဦးကို ဧရာဝတီမှ ကိုယ်တိုင် သွားရောက် တွေ့ဆုံပြီး ဖြစ်စဉ်များကို မေးမြန်း ခဲ့သော်လည်း အထက်မှ ဖြေကြားခွင့် အမိန့် မရရှိသည့်အတွက် မဖြေကြားရဲကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံ ရိုက် ယူရာတွင်လည်း တာဝန်ရှိ ရဲမှူးက တားမြစ် ခဲ့သည့်အတွက် မှတ်တမ်း မယူခဲ့ရပေ။ သို့သော် လည်း ရဲ တဦးမှာ ညဘက် မျက်လုံးအောက်တွင် လေးခွ မှန်ထားသည့် ဒဏ်ရာကြောင့် ၆ ချက် ချုပ်လိုက် ရကြောင်းနှင့် ကျန်တဦးမှာ နောက်စေ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာနှင့် ဘယ်ဘက် မျက်လုံးအထက် နဖူးတွင် ထိခိုက် ဒဏ်ရာ တို့ ပြင်းထန်ခဲ့သည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားသည့် နေရာတွင် ရှေ့မှ တားမြစ် အမိန့်ပေးခဲ့သည့် မုံရွာခရိုင်ရဲမှူး ဦးတင်ထွန်းမှာလည်း ညာဘက်ဒူးဆစ်တွင် ပြင်းထန်သည့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
“ကျနော်က တားမြစ်ဧရိယာမှာ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လယ်သမားတွေကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ သုံးကြိမ် အော်ပြီး သတိပေး ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ရွာသားတွေက ရဲတွေကို ခဲနဲ့ စပြီး ပစ်ပါတယ်။ ကျနော့်ဆီလာတဲ့ ခဲတွေ ကို ရဲသားနှစ်ဦးက ဒိုင်းတွေနဲ့ ကာပေးလို့ ခဲတွေက မျက်နှာကို မမှန်တာပါ” ဟု ခရိုင်ရဲမှူးက ပြော သည်။
ဆည်တည်း ကျေးရွာမှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသော ဒေသခံများက မုံရွာဆေးရုံသို့ သွားရောက် မကုသရဲကြောင်း၊ သွားရောက် ကုသသည့် အခါတွင် ရဲများ၏ ဖမ်းဆီးခြင်း ခံရမည်ကို စိုးရိမ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် နီးစပ်ရာ ဆေးပညာ နားလည်သူများနှင့်သာ ပြသ နေရကြောင်း ဆည်တည်းရွာသူ မ၀င်းဝင်းဌေးက ဆိုသည်။
“ကျမတို့ ရွာက ရဲဆိုရင်ကို တအား မုန်းနေကြပြီ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့တွေက ကျမတို့ကို အရမ်း နှိပ်စက် တယ်။ နောက်ပြီး မဟုတ်မမှန် စကားတွေကိုလည်း ပြောဆိုကြတယ်။ အခုကိစ္စမှာလည်း ရဲတွေက ကျမတို့ လက်တွေကို တုတ်တွေနဲ့ ရိုက်တယ်။ ပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲ ခေါင်းဝင်ခိုင်းပြီး နောက်ကြောကို တအုန်း အုန်းနဲ့ ထုတာ” ဟု သူက ပြောသည်။
ဆက်လက်၍ ၎င်းက ရဲများသည် မီးသတ်ပိုက်ထဲသို့ ဓာတ်ဆီများ ထည့်ပြီး ဖြန်းပက်ရန် လုပ်ဆောင် ကြောင်း၊ ပထမ ဖြစ်စဉ် ရှိခဲ့သည့် အတွက် ၎င်းတို့က မီးသတ်ကားကို လေးခွနှင့် ပစ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့ လူအုပ်ကြားထဲသို့လည်း မီးခိုးဗုံး နှစ်လုံး ပစ်သွင်းကြောင်း ရှင်းပြသည်။
“တကယ်လို့သာ ကျမတို့က လက်ဦးမှု မရရှိဘူးဆိုရင် မီးခိုးဗုံးနဲ့ မီးသတ်ပိုက်က ဓာတ်ဆီတွေ ပေါင်းပြီး အခုဆို သေလောက် ပါပြီ” ဟု မ၀င်းဝင်းဌေးက ပြောသည်။
မ၀င်းဝင်းဌေး ပြောဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆားလင်းကြီး စခန်းမှူး ဦးလှငွေက လုံးဝမဟုတ်ကြောင်း ငြင်းဆန် ပြီး ရဲများ အနေဖြင့် အကြမ်းဖက်နည်းကို အသုံးမပြုကြောင်း၊ မီးသတ်ကားမှာ လူစုလူဝေးပြုခြင်းကို ဖြိုခွင်း ရန်သာ ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည် ရှင်းပြသည်။
“မီးသတ်ပိုက်က ရေတောင် မထုတ်ရသေးဘူး။ ကားကို လေးခွတွေ ခဲတွေနဲ့ ပစ်လို့ မီးသတ်ကားလည်း ထွက်ပြေး သွားရတယ်။ ကျနော်တို့ ဘက်က မီးခိုးဗုံး မသုံးပါဘူး။ သူတို့ဘက်ကပဲ ပုလင်းထဲကို ဓာတ်ဆီ ထည့်ပြီး မီးစနဲ့ပစ်လို့ မီးတွေ လောင်ရတာပါ။ တကယ်တမ်း ရဲတွေက ၀ိုင်းလုပ်ရင် လုပ်လို့ရတာပေါ့။ ကျနော် တို့က လူအင်အားသုံးပြီး ဖြိုခွင်းတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး” ဟု သူက ဆိုသည်။
ဆည် တည်း ရွာသည် လက်ရှိအချိန်တွင် ဥပဒေမဲ့ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊ တရားဝင် ဆန္ဒပြသည်ကို အုပ်ချုပ် သူများ ဘက်မှ လက်ခံ၍ ရကြောင်း၊ ၂၅ ရက်နေ့က တားမြစ်ဧရိယာတွင် ဝင်ရောက် လယ်ထွန် သည်ကို ရဲ များက တားမြစ် ခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ဆားလင်းကြီး မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်သောင်က ပြော သည်။
“တကယ့်တကယ် အဲဒီလယ်တွေက ဦးပိုင်အမည် မပေါက်သေးတဲ့ လယ်ယာမြေတွေ။ အဲဒီအပေါ်မှာ သူတို့ က ထွန်ကြတာ။ ကျနော်တို့က လယ်ယာမြေ လျော်ကြေးကို အားလုံး တပြေးညီ ပေးပြီးပြီ။ ယာမြေ တဧက ကို ကျပ် ၁၀ သိန်း ပေးထားတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ဧပြီ ၂၇ ရက်နေ့အထိ လျော်ကြေး ပေးထားသည့်မြေ ၂၀၃၁ ဧက ဖြစ်ပြီး ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ၂၀၆၈၀. ၈၁ ထုတ် ပေးပြီး ဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီမှ စုံစမ်း သိရှိရသည်။
လက်ပန်းတောင်း ဒေသတွင် ဒေသခံများ လုပ်ကိုင် စားသောက်နေသည့် မြေဧက ၇၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး ယင်းမြေ ဧက ၇၀၀၀ ကျော်ကို ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ကာ စီမံကိန်း တားမြစ်နယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ် ဆောင် ရွက် လျှက် ရှိကြောင်း၊ ဒေသခံများ အနေဖြင့် လယ်ထွန် စိုက်ပျိုးစရာ လုပ်ကွက်များ မရှိတော့သည့်အတွက် အစိုးရ ကို နည်းလမ်းမျိုးစုံနှင့် ဆန့်ကျင်မှုများ ပြုလုပ်လျှက် ရှိနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများက ပြော သည်။
လက်ပံတောင်း တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့မှ ကိုမင်း ကိုနိုင်က “ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ထားတဲ့ ဧရိယာလို့ အကြောင်းပြပြီး လယ်မထွန်ရဘူး ဆိုတာတော့ သိပ်တော့ မဟုတ်ဘူး။ နှစ်ဖက်စလုံး ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ်ဖို့လိုတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် လက်ပန်းတောင်းတောင်ရှိ ကျေးရွာ ၂၆ ရွာမှ ဒေသခံ အင်အား ၅၀၀ ကျော်တို့ သည် တရား ၀င် ဆန္ဒ ပြခွင့် ရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြစ်အတွင်း သင်္ဘောနှစ်စီးတိုက်မိကျပ်သိန်း ၅၀၀၀ တန်ဆီတင်သင်္ဘောမြုပ်
ရန်ကုန်- စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနပိုင် ဆီတင်သင်္ဘောနှင့် ကားများတင်ဆောင်လာသော သင်္ဘောတစ်စီး တိုက်မိကာ ကျပ်သိန်း ၅၀၀၀ ခန့် တန်ဖိုးရှိ ဆီတင်သင်္ဘောမှာ သီလ၀ါဆိပ်ကမ်းအနီး ရန်ကုန်မြစ်အတွင်း နစ်မြုပ် သွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သီလ၀ါဆိပ်ကမ်းမှ စင်္ကာပူဆိပ်ကမ်းသို့ပြန်သော ကားတင်သင်္ဘော နှင့် မော်လမြိုင်မှ ရန်ကုန်သို့ ပြန်ဝင်လာသည့် မြန်အောင်ဆီတင် သင်္ဘောတို့သည် ညနေ ၃ နာရီခန့်တွင် တိုက်မိခဲ့ပြီး မြန်အောင် သင်္ဘော နစ်မြုပ် ခဲ့ သည်ဟု စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဌာနတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
နစ်မြုပ်ခဲ့သော မြန်အောင်သင်္ဘောသည် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပိုင်သင်္ဘောဖြစ်ပြီး ဆီတင်ခြောက်စီးအနက် တစ်စီးဖြစ် ကာ တန်ကြေးအားဖြင့် မြန်မာကျပ်ငွေသိန်း ၅၀၀၀ ခန့်တန်ဖိုးရှိကြောင်း စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ သတင်းရ ရှိသည်။
“မှားတာက ဆီတင်သင်္ဘောကမှားတာ။ နိုင်ငံခြားသင်္ဘောကြီး တွေက လမ်းကြောင်းမှန်ရင် ဖယ် ပေးလေ့မ ရှိဘူး” ဟု ယင်းဆိပ်ကမ်းအနီးရှိ သမန်မောင်း သူ တစ်ဦးက သူ၏အမြင်ကို ဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြစ်အတွင်း သဲသောင်များကြောင့် ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောများသည် အလွယ်တကူရှောင်တိမ်း ရန်ခက်ခဲကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
နစ်မြုပ်ခဲ့သော မြန်အောင် ဆီတင်သင်္ဘောတွင်ပါရှိသည့် သင်္ဘောသား ၁၇ ဦးအား အနီးရှိရေ တပ်စစ် သင်္ဘောမှ အချိန် မီ ကယ်တင်နိုင် ခဲ့သောကြောင့် လူအသေ အပျောက် မရှိကြောင်း စွမ်းအင် ၀န်ကြီးဌာနမှ တာဝန် ရှိသူ တစ်ဦးက ဆိုသည်။ ဆီတင်သင်္ဘောသည် မော်လမြိုင်တွင် ဆီများချထားခဲ့သောကြောင့် ရန်ကုန်သို့ ပြန်အ ၀င်တွင် လက်ကျန်ဆီမပါတော့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
From:7Day News Journal
ဆင်းတုရှိခိုးတာ အကျိုးရှိသလား..(ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်) ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းသိသင့်ပါတယ်
Posted by drmyochit Monday, April 29, 2013, under ဗဟုသုတ | No comments
ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန် စံလွန်သွားတာ နှစ် ၂၅၀၀ ကျော်ပြီ။ မရှိတော့တဲ့ မြတ်စွာ ဘုရားကို ဆည်းကပ် ကိုးကွယ်လို့ ရသေးသလား။ ကိုးကွယ်နေ လို့ကော အကျိုး ရှိပါမလား။
ဗုဒ္ဓ ဘာသာက ဆင်းတုတွေ၊ ရုပ်ပုံပန်းချီကားတွေကို ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာလား..ဆင်းတုတွေ ရုပ်ပုံတွေကို ရှိခိုး ကိုးကွယ်နေလို့ ဘာအ ကျိုးရှိမှာလဲ။
ဒါတွေက အနောက်နိုင်ငံသားတွေ ဘာသာခြား တွေမေး တက်တဲ့ မေးခွန်းတွေပဲ။
ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားဟာ ပရိနိဗ္ဗာန် စံလွန်သွားပြီ ဖြစ်ပေမဲ့ သူဟောကြားထားတဲ့ တရားအဆုံးအမတွေက ပကတိ အတိုင်း ရှိနေကြ တုန်းပဲ။ သူဘုရားဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းခဲ့တာ အခုလို တရားအဆုံးအမကို ဟောပြ ဖို့ပဲ။ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကို ညွှန်ပြပေးခဲ့ဖို့ပဲ။
ဒါတွေက အခု အကုန်ရှိနေသေးတာမို့ ဒီတရားတော်အတိုင်း လိုက်နာကျင့်ကြံ အားထုတ်ရင်း မြတ် ဗုဒ္ဓ ရှိစဉ်တုန်း ကလိုပဲ ထပ်တူ ထပ်မျှ အကျိုး ထူးများကို ခံစား ရပါတယ်။ နိဗ္ဗာန် ချမ်းသာ ကိုလည်း မျက်မှောက်ပြုနိုင် ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ပရိနိဗ္ဗာန်မစံမီမှာ ဗုဒ္ဓကိုယ်စား ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ဖို့အတွက် စေတီ ၄ မျိုးကို သတ်မှတ် ပေးတော် မူခဲ့တယ်။
ဓာတုစေတီ… ဗုဒ္ဓရဲ့ ရုပ်ကလပ်တော်ကို မီးသဂြိင်္ုဟ်တဲ့အခါ ကျန်ရစ်တဲ့ ဓါတ်တော်များကို ဘုရားရှင် ကိုယ်စား ကိုးကွယ်နိုင်တယ်။
ဓမ္မစေတီ… ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ၄၅ နှစ်တိုင်တိုင် ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ ပိဋကတ်သုံးပုံ၊ မဂ်လေးတန်၊ ဖိုလ်လေး တန်နဲ့ နိဗ္ဗာန်တရားတို့ကို ဘုရားရှင်ကိုယ်စား ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်နိုင်တယ်။
ဥဒ္ဒိဿေ စတီ… သက်တော်ထင်ရှား မြတ်ဘုရားကို ရည်မှန်းပြီး ရေးသားတဲ့ ပုံတော်၊ ပန်းချီကားချပ်တွေ၊ သစ်သား ဆင်စွယ် စသည်တို့ကို ထုလုပ်ထားတဲ့ ဆင်းတုတွေ၊ အုတ်၊ သဲ၊ အင်္ဂတေ စသည်တို့ဖြင့် တည်ဆောက် ထားတဲ့ စေတီပုထိုးတွေ၊ ဒီအရာတွေအားလုံးကို ဘုရားရှင်ကိုယ်စား ရှိခိုးပူဇော်နိုင်တယ်။
ပရိဘောဂစေတီ… မဟာဗောဓိပင် အပါအ၀င် ဘုရားရှင် အသုံးပြုတော်မူခဲ့တဲ့ သပိတ်၊ သင်္ကန်း၊ တောင်ဝှေးစသည်တို့ကိုလည်း ဘုရားရှင်ကိုယ်စား ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်နိုင်တယ်။
အဲဒီတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ပုံတော်ပန်းချီကားတွေ၊ ဆင်းတုတွေကို ရှိခိုးပူဇော်တာဟာ ဥဒ္ဒိဿစေ တီအဖြစ် ရည်မှန်းပြီး ရှိခိုးပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ပန်းချီကားအနေနဲ့ ရုပ်ထု၊ ဆင်း တုတော်များ အနေနဲ့ ရှိခိုးပူဇော်နေတာ မဟုတ်ဘူး။
ဥပမာ… ကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့ မိဘများရဲ့ဓါတ်ပုံကို ရှိခိုးကန်တော့နေတဲ့သူဟာ စက္ကူဓာတ်ပုံကို ရှိခိုးကန် တော့နေ တာမဟုတ်ဘူး။ သူ့မိဘကို ရည်မှန်းပြီး ရှိခိုးကန်တော့နေခြင်းဖြစ်တယ်။ မိဘဓာတ်ပုံက အသက် ထင်ရှား ရှိစဉ် အခါက မိဘတို့ရဲ့ ရုပ်ပုံကိုထင်မြင်လာအောင် အထောက်အပံ့ပြုတယ်။ မိဘရဲ့ ဂုဏ်ကျေး ဇူးတွေ ထင်ပေါ် လာအောင် ကျေးဇူးပြုပေးတယ်။
စက္ကူဓာတ်ပုံကို ကျော်လွန်ပြီး မိဘတို့ရဲ့ တကယ့်ရုပ်သွင်နဲ့ မိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးများ ပေါ်လွင်လာအောင် ကြည့်ရှူရ သလို ဘုရားပန်းချီ၊ ရုပ်ထု၊ ဆင်းတုများကိုကျော်လွန်ပြီး မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တကယ့်ရုပ်သွင်နဲ့ ဂုဏ်တော် များ၊ ကျေးဇူးတော်များပေါ်လွင်အောင် ကြည့်ရှုကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပုံတော်၊ ဆင်းတုတော်တိုဟာ အထောက်အပံ့ ပစ္စည်းမျှသာဖြစ်တယ်။ ပုံတော်၊ ဆင်းတုတော်တွေ မရှိဘဲနှင့် လဲ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဂုဏ်တော်များကို ရည်မှန်းပြီး ရှိခိုးပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ မြတ်စွာ ဘုရား သက်တော် ထင်ရှား ရှိစဉ်အခါကလည်း ဘုရားဂုဏ်တော်များကိုသာ ရည်မှန်းပြီး ပူဇော်ရပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဂုဏ်တော်များဆီသို့ စိတ်ရောက်တာချင်းတူရင် အကျိုးကျေးဇူးကလည်း တူမှာပဲ။ ဂုဏ်တော်များ စုပေါင်းထားတဲ့ ဘုရားရှင်ကို ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင် အာရုံပြုရမယ်။
ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ရုပ်ပုံ၊ ရုပ်ထုတွေကို ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက မသိ၊ နားမ လည် သူတွေ ရဲ့ လွဲလွဲမှားမှား စွပ်စွဲမှုများသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာ သာဝင်တွေ ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်နေတာက အရဟံအစ ဘဂ၀ါအဆုံး အတုမရှိတဲ့ ဂုဏ်တော်များရဲ့ ပိုင်ရှင်ဖြစ် တဲ့ ဗုဒ္ဓဘုရား၊ ထိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားညွှန်ပြခဲ့တဲ့ မဂ်လေးတန်၊ ဖိုလ်လေးတန် နိဗ္ဗာန် ပရိယတ် လို့ဆို တဲ့အတုမရှိ မြင့်မြတ်တဲ့ ဓမ္မတရား၊ သစ္စာလေးပါး မြတ်တရားကို သိမြင်ကြပြီးတဲ့ အရိယာ သံဃာ များနဲ့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အဆုံးအမဩ၀ါဒအတိုင်း ကျင့်ကြံနေကြတဲ့ သမုတိသံဃာ၊ ဒီဘုရား၊ တရား၊ သံဃာလို့ ဆိုအပ်တဲ့ ရတနာမြတ်သုံးပါးပါပဲ။
ဒီလို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ထိုက်တဲ့ အမြတ်ဆုံးရတနာ သုံးပါးဆိုတာ အခြားဘယ်မှာ ရှာဖွေလို့ ရနိုင်ပါတော့ မလဲ။
ရှမ်းပြည်တပ်မတော်(မြောက်ပိုင်း)တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ မိုင်းရှုးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဗမာလူမျိုးများအား အတင်း အဓမ္မ နှင်ထုတ်နေ
Posted by drmyochit Monday, April 29, 2013, under သတင်းများ | No comments
ယခုနှစ်မတ်လမှစ၍ ၀မ်ဟိုင်း အခြေစိုက် ရှမ်းပြည် တပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း) အဖွဲ့သည် ရှမ်းပြည် နယ်၊ မိုင်းရှုး မြို့ နယ် အတွင်းနေထိုင်ကြသော ဗမာ လူမျိုး များအား အတင်း အဓမ္မ ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းခြင်း၊ ဖမ်း ဆီးခြင်း များဆောင် ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ဒေသခံ များထံမှ ကြားသိရပါတယ်။ ၎င်းသတင်းနှင့် ပတ် သက် ၍ဒေသခံ များအား မေးမြန်း ချက်အရ ယခုနှစ် အစော ပိုင်းမှစ၍ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း) တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် မတ်လ( ၄) ရက်နေ့ မှ တွင် မိုင်းရှုးမြို့နယ်၊ လွိုင်ဆောင်ထောက်ဒေသ၏မြောက်ဘက် (၇)မိုင်ခန့်အကွာရှိ ကျောက်ဖြူ တောင်ကျေး ရွာမှ ရွာသူ/ရွာသားများအား (၇)ရက်အတွင်း မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာ နေရာဒေ သ အသီး သီး သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင် ရန်နှင့် အပြီးမရွှေ့ပါက ကျန်ရှိနေသောနေအိမ်များအား မီးရှို့ဖျက် ဆီးပစ် မည် ဟုပြော ကြား ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါ တယ်။
ဧပြီလ (၄)ရက်နေ့တွင်လည်း မိုင်းရှုးမြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်(၂)၊ နယ်မြေ(၆)တွင် နေထိုင်သော ဦးဝင်းကြိုင် (အဖ) ဦးအေး၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓသည် မိုင်းရှုးမြို့မှ လွိုင်ဆောင်ထောက်ဒေသသို့ သားစားကြက် များပို့ရန် သွား ရောက်ခဲ့ရာမှ ပါချီကျေးရွာအကျော် တောင်ကုန်းအတက်တွင် ဆိုင်ကယ်ပျက်၍ပြင်နေစဉ် SSPP/SSA အဖွဲ့ မှ ရောက်ရှိလာပြီး ၎င်းအဖွဲ့မှ ဦးဝင်းကြိုင်အား ရှမ်းဘာသာစကားဖြင့်မေးမြန်းရာ နားမ လည် သဖြင့် ဖမ်းဆီး ကာပုံဆန်ကျေးရွာ၌ ချုပ်နှောင်ထားကြောင်း၊ ယခုအထိပြန်မလွှတ်သေးကြောင်း သိရှိရ ပါ တယ်။
အဆိုပါ အဖွဲ့သည် ပါချီကျေးရွာနှင့် ပန်ငကျေးရွာများတွင် နေထိုင်လျက်ရှိသော ဗမာလူမျိုးများအား ၎င်းေ ကျး ရွာ များမှ မောင်းထုတ်ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းသည့်စာအား ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏လက်မှတ်၊ တံဆိပ် တုံး များ အသုံး ပြု၍ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ဧပြီလ(၈)ရက်နေ့တွင် ပါချီကျေးရွာသို့ထပ်မံရောက်ရှိလာပြီး ၎င်းရွာမှပြောင်းရွှေ့ခိုင်းထားသော ဗမာလူ မျိုးများ အား ပြောင်းရွှေ့ခြင်းရှိ/မရှိ လိုက်လံစစ်ဆေးကြောင်း၊ ဗမာလူမျိုးဖြစ်သူ ဦးကျော်ရွှေနှင့် ဇနီးဒေါ်ေ အးအေးမြင့် တို့သည် ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမရှိသေးသဖြင့် ၎င်းတို့မှ ဒေါ်အေးအေးမြင့်အား ဘာလူမျိုး လဲမေး မြန်းကြောင်း ကချင် လူမျိုးဟု ပြောသဖြင့် အိမ်ထောင်စုစာရင်းကိုတောင်းယူကြည့်ရာ အိမ်ထောင်စု စာရင်း တွင် ဗမာဟုရေးထား သဖြင့် (၂)နာရီအတွင်း ပြောင်းရွှေ့ရန်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ပါချီကျေးရွာတွင် ဗမာအိမ်ထောင်စု (၁၁)စု ရှိပြီး ဧပြီလ(၈)ရက်နေ့မှစ၍ အိမ်ထောင်စုအားလုံး မိုင်း ရှုးမြို့နှင့် လွယ်ဆောင်ထောက်သို့ပြောင်းရွှေ့သွားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ SSPP/SSA တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် လမ်း မပေါ် တွင် ဖြတ်သန်းသွားလာသော ဆိုင်ကယ်နှင့် ကားများအားလည်း စစ်ဆေးပြီးဗမာလူမျိုးများ ပါ/မပါ မေးမြန်း ကြောင်း၊ ဗမာလူမျိုးများဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါက ပစ္စည်းများနှင့် ဆိုင်ကယ်များအား ရှာဖွေ စစ်ဆေးကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ဧပြီလ(၁၁)ရက်နေ့တွင်လည်း မိုင်းရှုးမြို့နယ်၊ နမ့်တောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နမ့်တောင်ကျေးရွာရှိ ဦးစံဝိ၏ အ ချိုခြောက် စက်ရုံမှ ဗမာအလုပ်သမားများအား ရိုက်နှက်မောင်းထုတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းကျေးရွာရှိ ဗမာလူမျိုးများ အား အမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့ရန်ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
အထက်ပါသတင်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး SSPP/SSA အဖွဲ့မှ သဘောထားမှတ်ချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေး ကြောင်းနှင့် ဗမာစစ်တပ်ကလည်း သင်္ကြန်အပြီးထိ ၎င်းပြဿနာအား ထိထိရောက်ရောက်ဟန့် တားထိန်း သိမ်း တာမျိုး မတွေ့ရသေးကြောင်း သိရပါတယ်။
အထက်ပါကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု လေ့လာသူတစ်ဦးကတော့ “ ဒီသတင်း မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ SSPP/SSA ကမလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စဘဲ၊ လူမျိုးရေးပြဿနာဖြစ်အောင် ရည်ရွယ် ချက်ရှိရှိနဲ့ ဖန်တီးနေတယ်လို့ ယူဆရမယ်၊ တန့်ယန်း/မိုင်းကောင်ဘက်မှာ ပြီးခဲ့ တဲ့ဖေဖော် ၀ါရီ လက တည်းက ဗမာစစ်တပ်နဲ့ စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေ တောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာ အခုထိ မပြီးသေးဘူး၊ မိုင်းရှုးပြဿ နာကို ဗမာ စစ်တပ်က အင်အားသုံးပြီးဝင်ရှင်းရင် ပဋိပက္ခကပိုကြီးသွားနိုင်တယ်၊ ဒီလိုဆို ရင်ငြိမ်း ချမ်းရေးက ပိုပြီး အလှမ်း ဝေးသွားနိုင်တယ် ” ဟုမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
Credit to:Myanmar Online News
မြန်မာ အမျိုး သမီးများ သတိပြုနိုင်ရန် ကာယိနြေ္ဒနှောက် ယှက်မှု တွေကိုဥပဒေ အရအရေးယူနိုင်ရန် ( ဥပဒေ ကြောင်း အရ အခမဲ့ အကူအညီပေးပါသည်။ )
Posted by drmyochit Monday, April 29, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
မြန်မာ အမျိုး သမီးများ သတိ ပြုနိုင်ရန် ကာယိနြေ္ဒနှောက် ယှက်မှု တွေ ကို ဥပဒေ အရ အရေး ယူနိုင်ရန် ( အမြန်ဆုံး သတင်းပို့ပါ ဥပဒေကြောင်းအရ အခမဲ့ အကူအညီပေး ပါသည်။ )
အစ်မ တစ်ယောက် က သူမျက်မြင်တွေ့ ခဲ့တာကို သူကိုယ် တိုင် စာရေး သားခြင်းဖြစ် ပါတယ်။
မြန်မာ အမျိုး သမီးများ သတိပြုနိုင် ရန် ဦးစွာပထမ ပြောချင် တာ ကတော့ အဲ့ အတွက် အောက်ပါ အချက် အလက်များ လီဆယ် လုပ်ကြံရေး သားခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ကျနော်အာမခံနိင်ပါတယ်။ နောက် တစ်ချက် က ဒီဟာက ဘာသာရေး အဓိ ကရိုဏ်း ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ် လိုခြင်း မရှိပါဘူး။ မြန်မာဖြစ်ဖြစ် တရုတ် ဖြစ်ဖြစ် ကုလားဖြစ်ဖြစ် ယုတ်မာတဲ့သူဟာ ယုတ်မာတာပါပဲ။ အဲ့ဒီထဲကမှာအောက်ကစာပိုစ့်ထဲမှာ ယုတ် မှာနေ တဲ့ ကုလား တစ်ယောက် အကြောင်းကိုဖ တ်ရင် မိန်းကလေးများ သ တိ ထား နိင်ကြ ပါစေ။
ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးချင်းဆီ သိရအောင် share စေချင် ပါတယ်။ ယောက်ျား ပုရိသများ အနေနဲ့လဲ ကိုယ် ပတ်ဝင်းကျင် မှာ အဲလို ယုတ်မာ တာတွေ့ရင် ကူညီ ကာကွယ်ပေးနိင်ကြပါစေ။ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန် ရှိသူ များလဲ သတိပြု နိင်ကြပါစေ။
အောက်တွင် အကူ အညီတောင်း ခံနိုင်သောနေရာနှင့်ဖုန်း နံပါတ်များကို ပူးတွဲပေးလိုက်ပါတယ်။
ဥပဒေ ကြောင်းအရ အကူ အညီ လိုအပ် သူများ အနေဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြ ထားသော လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံ ပါတ်များသို့ ဖုန်းဖြင့် ဖြစ်စေ၊ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ အချိန်မရွေးအကူအညီ တောင်းခံနိုင်ပါသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ ၊ နံနက် ၁၀း၃၀ အချိန်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာ တောင်ညွန့် မြို့ နယ်၊ ကန်တော်လေး စာတိုက် ကားမှတ်တိုင်တွင် အမျိုးသမီးများ နှင့် ခရီးသည်များ သည် ကားစောင့် နေကြပါ သည်။ ထိုသို့ ကားစောင့်နေစဉ် ခနာကိုယ် ၀၀၊အရပ် ၅ပေ ၅လက်မခန့် ၊အသက် ၅၀ ၀န်းကျင်ခန့် တဏှာရူး၊ နှာဘူးကုလားတစ်ကောင်သည် ကားစောင့်ဆိုင်းနေသော မြန်မာ အမျိုး သမီးများ အား ရိုင်းပြ စော်ကားစွာ ဆံစမှခြေဖျားထိလှည့်ပတ်ကြည့်ရှု့ နေပါသည်။
အမျိုး သမီးငယ် ၃ ဦးသည်ထိုတဏှာရူး၊နှာဘူးကုလားကို ရှောင်ရန်နေ ရာပြောင်း လိုက်သည်ကို တွေ့ လိုက်ပါ သည်။ သို့ ပါသော်လည်း တဏှာရူး၊ နှာဘူးကုလားသည် ထိုအမျိုးသမီးများအနီးသို့ သွား၍ ရိုင်းပြ စော် ကားစွာ လှည့်ပတ်ကြည့်လိုက် အတူပါလာသောကုလားအုပ်စုသို့ သွား၍ တီးတိုးပြော လှောင်ပြောင် လိုက် မိန်းကလေးများအနီးသို့ပြန်လာလိုက် လုပ်နေပါသည်။ ထိုစဉ် အုပ်ထိန်းသူ ဟု ထင်ရသော အမျိုးသား တစ်ဦး စီးနင်းလိုက် ပါလာသော ကားမှာကားဂိတ်သို့ ရောက်လာ၍ အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးသည် လူကြီး လာပြီဖြစ်ကြောင်း သိစေရန် “ ဖေဖေလာပြီ “ ဟုပြောကာ သွားကြိုစဉ် နှာဘူး ကုလားသည် ကျန် အမျိုးသမီး တစ်ဦးနောက်မှ တင်ပါးကို လက်ဖြင့် တိုက်မိ သလို တမင်လုပ်၍ ကားလမ်း မဘက်သို့ လျှောက်သွား ပါသည်။ ထို အမျိုးသမီး သည် ရိုင်းပြစော်ကား သော တဏှာရူး၊နှာ ဘူး ကုလား အား ထီးဖြင့် လိုက်ရိုက် သည်ကိုတွေ့ လိုက်ပါသည်။ တဏှာရူး၊နှာဘူးကုလားကောင် သည် တစ်ဘက် ကားလမ်းသို့ဖြတ်ပြေး ပါသည်။
အုပ်ထိန်း သူ ဟုထင်ရသော လူလတ်ပိုင်း အမျိုးသား တစ်ဦးသည် တဏှာရူး၊နှာဘူးကုလား နောက်သို့ ဆဲ၍ ရိုက်နှက်ဆုံး မ ရဲစခန်းသို့ပို့ရန် တစ်ဘက် ကားလမ်းသို့ ဖြတ်၍ လိုက်ပါသည်။ တဏှာရူး၊နှာဘူး ကုလားကောင် သည် မြယာ ကုန်းဗလီ ဘက်သို့ ထွက်ပြေး သွား ပါသည်။
တဏှာရူး၊ နှာဘူး ကုလားကောင် အား စုံစမ်းရန် ကုလား အုပ်စု အားပြန် လည် ရှာဖွေကြ ရာ ကားဂိတ်တွင် မရှိတော့ပါ။ ထိုကုလား အုပ်စုတွင် ရုပ်သန့် သန့် ၊မျက်မှန်ဖြင့် ကျောင်းသား လူရွယ်ပုံ စံလူငယ် ကုလားလဲ ပါပါသည်။
မြန်မာ အမျိုး သမီး များသည် မိမိတို့ ကိုရိုင်းပြစော်ကားနေမှုများ အားလူ အများကြား တွင်လူ အများ သိမည် ကိုရှက်ခြင်း၊ကြောက်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာသို့ တိုင်ကြားရာတွင် ရဲစခန်း၊တရားရုံးတို့ တွင်ဖြေရှင်း ထွက်ဆို ရန် ရှက်ခြင်း၊ အရှက် သိက္ခာ ကျမည်ကို စိုးရိမ်ခြင်း တို့ ကြောင့်မျို သိပ်သည်း ခံနေကြရပါသည်။ သို့ ပါသော်လည်း ထိုသို့ ရှက်၊ကြောက်၊သည်းခံနေခြင်းများ အာ:ပိုမို၍အခွင့်ကောင်းယူကာ ရိုင်းပြစော်ကား လျှက်ရှိနေ ပါသည်။ သို့ ဖြစ်ပါ၍ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့ နယ်အတွင်းရှိသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိ အဖွဲ့ အစည်း များ မှ လည်းဂရုပြု၍ မြန်မာ အမျိုး သမီး များအား တဏှာရူး၊ နှာဘူး ကုလား အုပ်စု တစ်စုမှ ရိုင်းပြစော် ကားနေ မှုများ ကို ဝိုင်းဝန်းကာကွယ် ကူညီ စောင့်ရှောက် ပေးပါရန် မေတ္တာ ရပ်ခံ အပ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ တဏှာရူး၊ နှာဘူး ကုလား အုပ်စုသည် မြန်မာ အမျိုး သမီးများ အပေ: ရိုင်းပြ စော်ကား နေမှု များအား သာမန် အသေး အဖွဲ၊ သေးငယ် သောပြသနာ တစ်ရပ် အဖြစ် ဂရုမပြု၊ ထိရောက်စွာ အရေး ယူ အပြစ် ပေးခြင်း များမရှိပါက အောက်ပါ နောက်ဆက်တွဲပြသနာများ၊ပြစ်မှုများဖြစ်ပွားလာနိုင်ပါသည်။
မြန်မာ အမျိုး သမီး များကို ရိုင်းပြ စော်ကား လာသော တဏှာရူး၊ နှာဘူး ကုလားအုပ်စု နှင့် ထိုသို့ ရိုင်းပြ စော်ကား မှုများကို မခံနိုင်၊ ကြည့်မနေနိုင်သော ဖခင်၊ ဘကြီး၊ ဦးလေး၊ အကို၊ မောင်၊ အမျိုးသားရေး စိတ် ဓါတ်ဖြင့် ကာကွယ် ပေးကြသောမြန်မာအမျိုးသားများခိုက်ရန်ဖြစ်ပွား၍ ခြေလွန်လက်လွန် ဖြစ်ပါက မလိုလား အပ်သော အမှု အခင်း များဖြစ် ပွားနိုင်ပြီး မြန်မာ အမျိုး ကောင်းသား များ ထိခိုက် နစ်နာ ဆုံး ရှုံးနိုင်ခြင်း။
တစ်ဘက် ကားလမ်း သို့ ဖြတ်ကူး ပြေးလိုက်စဉ် လူ နှင့် မော်တော်ယာဉ် တိုက်မှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်း။
ကန်တော်လေး စာတိုက် ကားမှတ် တိုင်တွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ အများ ဆုံးကားစောင့် ဆိုင်းခြင်း ရှိသော ကြောင့် မြန်မာအမျိုးသမီးငယ် ကျောင်းသူလေးများ ကိုရိုင်းပြ စော်ကား လာပါက ကျောင်းသား လူငယ် များနှင့် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းကြောင့် အနာဂတ်အတွက်တန်ဖိုးရှိသော ကျောင်းသား လူငယ် များကို ထိခိုက် နစ်နာ ဆုံးရှုံး မှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်း။
ထိထိ ရောက်ရောက် အပြစ်ပေး၊ အရေး ယူခြင်း များ မရှိပါက ပိုမို အတင့် ရဲလာကာ မုဒိမ်း မှုများ အထိဖြစ် ပေါ်နိုင်ခြင်း။
ဗလီ ဘက်သို့ ထွက်ပြေးလာေ သာ ရိုင်းပြ စော်ကား သောကုလားအား ဗလီဆရာများမှ ကာကွယ်မှု မပေး ရန် နှင့် ကာကွယ်ပေးခဲ့ပါက ထိုသူ/ ထို အုပ်စု တစ်စုကြောင့် ကျန်လူများပါ အမည် ဆိုးဖြင့် ထိခိုက် နစ်နာ နိုင်ပြီး လူမျိုးရေး ပြသနာများ ထိပါ ဖြစ်ပွား လာနိုင် ပါသည်။
သို့ ဖြစ်ပါ ၍ မြန်မာ အမျိုး သမီး ကြီး/ငယ် မရွေး မိမိတို့ သွားလာ လှုပ်ရှား ရာတွင် သတိပြုနိုင်ကြရန် အသိပေး လိုက် ရပါသည်။
Legal Aid Project ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အသက်(၁၈)နှစ်အောက် ရှိ ပြစ်မူ ကျူးလွန် စော်ကား ခံရသော ကလေး သူငယ်များ ၊ လူငယ် များနှင့် သက်သေများ ၊ ပြစ်မူ ကျူးလွန် သည်ဟု စွပ်စွဲ ခံရသော ကလေး သူ ငယ်များ နှင့် လူငယ်များ၊ အသက်(၁၈)နှစ် ကျော်သော်လည်း အမျိုးသမီးဖြစ်သည့်အတွက် ပြစ်မူ ကျူး လွန်စော် ကား ခံရသော(female survivos of gender based violence) အမျိုး သမီးများ အတွက် အမူလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခ (ရှေ့နေခ) တစ်စုံတစ်ရာမယူဘဲ ဥပဒေကြောင်းအရ အခမဲ့ ကူညီပေး သည့် စီမံ ချက်ဖြစ် ပါ သည်
-မသိ နားမလည် ၍ သော်လည်းကောင်း၊ တရားရုံး စရိတ် မတတ်နိုင်၍ သော်လည်းကောင်း၊ ရှေ့နေ ငှားရမ်းခ မတတ်နိုင် ၍သော်လည်းကောင်း၊ မိမိနစ်နာသောအမူကိုတိုင်တန်းရန် (သို့) စွပ်စွဲ ခံရသော အမူကို ရင် ဆိုင်ဖြေရှင်း ရန် အခက်အခဲ ရှိသူများအတွက် ဥပဒေကြောင်းအရ အခမဲ့ လိုက်ပါဆောင် ရွက်ပေး ရန်
-ပြစ်မူ ကျူးလွန် စော်ကားခံရသူ (နစ်နာသူ) အသက်(၁၈)နှစ်အောက် ကလေးသူငယ်၊ လူငယ်များအား ကျောင်း စရိ တ်အခက် အခဲ ရှိပါက ကျောင်းစ ရိတ်ထောက် ပံ့ ကူ ညီရန်
-ပြစ်မူ ကျူးလွန် စော်ကား ခံရသူ (နစ်နာသူ) များအား ဆေးကုသစရိတ် နှင့် တရားရုံးသို့သွားလာစရိတ် အခက် အခဲ ရှိပါက လူမူရေး စရိတ် ထောက်ပံ့ ကူညီ ရန်
-ပြစ်မူ ကျူးလွန် စော်ကားခံရသူ (နစ်နာသူ) အား အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနိုင်ရန်အတွက် အခက် အခဲရှိ ပါက အသက် မွေးဝမ်း ကျောင်းနိုင်ရန် အတွက် အခက် အခဲ ရှိပါက အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း သင်တန်း တစ်ခုခု တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် ထောက်ပံ့ သကူ ညီရန်
xxx အသက်(၁၈)နှစ်အောက် ကလေးများ၊လူငယ်များ ပြစ်မူကျူးလွန်ကြောင်းစွပ်စွဲခံရ၍ တရားရုံးတွင် အမူရင် ဆိုင်ရလျှင်
xxx အသက် (၁၈)နှစ်ကျော်သော်လည်း အမျိုးသမီးဖြစ်သည်အတွက် ပြစ်မူကျူးလွန်စော်ကားခံရလျှင်
"အမြန် ဆုံး သတင်းပို့ပါ ဥပဒေကြောင်းအရ အခမဲ့ အကူ အညီ ပေးပါသည် "
Legal Aid Project အောက်တွင် အမူလိုက် ပါဆောင်ရွက်သော ရှေ့နေများအား ရှေ့နေခ၊ ခရီးစရိတ်၊ စားစရိတ်၊ စာရွက်စာတမ်းခ များကို အမူ သည် များက လုံးဝ မပေးရပါ၊
ရှေု့နေများမှ ငွေကြေး တစ်စုံ တစ်ရာ တောင်းခံ လာပါက စီမံကိန်း မန်နေဂျာ ထံတွင် တိုင်တန်းနိုင် ပါသည်။
အမှတ်(၃၈၅/၃၈၉)၊ (၆)ထပ်၊ အခန်း(ခ)၊ ဂလိုဘယ်တာဝါ ၊ မဟာဗန္ဒုလလမ်း နှင့် ပန်းဆိုးတန်းလမ်းဒေါင့်၊ကျောက် တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
အကူ အညီတောင်း ခံနိုင်သောနေ ရာနှင့်ဖုန်းနံ ပါတ်များ
ဥပဒေကြောင်း အရ အကူ အညီ လိုအပ် သူများ အနေဖြင့် အောက် တွင် ဖော်ပြထားသော လိပ်စာနှင့် ဖုန်း နံပါတ် များသို့ ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ အချိန်မရွေးအကူအညီ တောင်းခံနိုင်ပါသည်။
အမှတ် (၃၈၅/၃၈၉)၊ (၆)ထပ်၊ အခန်း(ခ)၊ ဂလိုဘယ်တာဝါ ၊ မဟာဗန္ဒုလလမ်း နှင့် ပန်းဆိုးတန်းလမ်းဒေါင့်၊ကျောက်တံ တားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ (ပန်းဆိုးတန်းက Olympic Tower မှာပါ)
အမှတ်(၅၆) ၊ ပုသိမ်-မုံရွာ-ရေဦးလမ်း၊(၁၅)နယ်မြေ ၊ မြတ်တိုရပ်ကွက် ၊ပုသိမ်မြို့။
အမှတ်(၂၂၄/ခ)၊ (၃)ထပ် ၊မင်းလမ်း၊ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ပဲခူးမြို့။
အမှတ်(၃၃/ဘီ) သိပွံလမ်း၊အန်းဘဲတန်း ရပ်ကွက်၊မော်လမြိုင်မြို့။
ဝေသာလီခေတ် ကြေးသွန်းဆင်းထုတော် ပျောက်ဆုံးမူ ပြည်နယ် အစိုးရကို တိုင်ကြားမည်
ရခိုင်ပြည် နယ် ပေါက်တော်မြို့နယ် င၀က်စွယ် ကျေးရွာ ဘုန်းတော် ကြီး ကျောင်းမှ ပျောက်ဆုံးနေသော ဝေသာ လီခေတ် ဗုဒ္ဓ ဆင်းထုတော်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရွာသားများသည် ရခိုင်ပြည် နယ် အစိုးရထိ တက်ရောက် တိုင်ကြားရန် စီစဉ်နေ သည် ဟု သတင်း ရရှိသည်။
နိရဉ္စ ရာသို့ ကျေးရွာသား တစ်ဦးမှ ယခုလို ဖုံးဆက်ပြော ကြား သည်။
“ကျွန်တော်တို့ အခု စစ်တွေကိုလာတာက ဒီဘုရား ပျောက် သွားတဲ့ ကိစ္စကို ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေကို တိုင်ကြား ထားပေမဲ့ ဘာမှ မထူးခြားတဲ့ အတွက် အမှုဖွင့်လို့ ရမလား ဆိုပြီး မျော်လင့်ချက်နဲ့ လာတာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဌာ နဆိုင် ရာတွေ ကို သွားပြီး အခြေအနေတွေကို ပြောပြတော့ အမှုဖွင့်ဖို့ အတွက် ပြည်နယ်ရုံးက အမှုဖွင့် ခွင့်တောင်း ရမယ်လို့ ပြောပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ရခိုင် ဝေသာလီခေတ် ဗုဒ္ဓဆင်းထုတော်မှာ ဥာဏ်တော် (၉) လက်မ မြင့်ပြီး ရွာဘုန်းကြီးကျောင်း မီးခံ သေတ္တာ တွင် သိမ်းဆည်းထားရာမှ လွန်ခဲ့သောနှစ် ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့က ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်။
ပျောက်ဆုံးပြီးနောက် ကျေးရွာသားများမှ မြို့နယ်နှင့် ခရိုင်အဆင့် တာဝန်ရှိသူများအား တိုင်ကြား ထားခဲ့သည်။ တနှစ်ကျော်ကြာလာသည့် တိုင်အောင် ဘုရားပျောက်ဆုံးမူ ကိစ္စ တစ်စုံတရာ စုံစမ်း စစ်ဆေး မေးမြန်းမူ မရှိသေးကြောင်း ကျေးရွာသားများက ပြောသည်။
“ ဗုဒ္ဓဆင်းထုတော် ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ အတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မေလအတွင်းက သက်ဆိုင်ရာဌာန အသီး သီးသို့ ကျေးရွားသားများက တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က ဘာမှ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူ ဆောင် ရွက်ပေး တာ မရှိဘူး” ဟု ဆိုသည်။
ပျောက်ဆုံးသွာသော ဆင်းထုတော်မှာ ရှေးခေတ် ကြေးသွန်းဘုရားဖြစ်ပြီး အထူးသပ္ပါယ်ကာ တန်ဖိုးကြီးမား သည် ဟု ဆိုသည်။
ဘုရား ဆင်းထုတော်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး သတင်း အမျိုးမျိုးထွက်ပေါ် လာသဖြင့် ကျေးရွာသားများက ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီ လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း ကျက်သရေခန်းထဲရှိ မီးခံသေတ္တာထဲအား စစ်ဆေး ရာ ဆင်း ထုတော်မှာ ပျောက်ဆုံးနေသည်ဟု ဆိုသည်။
ဘုရားအား ထိန်းသိမ်းထားရာ မီးခံ သေတ္တာသော့အား ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ထံတွင် သိမ်းဆည်း ထား သဖြင့် ဆင်းထုတော် ပျောက်ဆုံးပြီးနောက် ကျေးရွာသားများ အကြား စိတ်ဝမ်း ကွဲပြားမူများလည်း ပေါ်ပေါက် နေကြောင်း သိရသည်။
ပျောက်ဆုံး နေသော ရှေးဟောင်း ဆင်းထုတော် အရေးအကိစ္စကို သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ် တာဝန်ရှိ သူများ မှ ဖေါ်ထုတ် စစ်ဆေးပေးရန် ကျေးရွာသားများက အထူးလိုလားနေကြောင်း သိရသည်။
မကြာမီဖွင့်လှစ်မည့် ပုဂ္ဂလိက အာမခံကုမ္ပဏီ ၁၂ ခုတွင် မတည်ရင်းနှီးငွေ ပေးသွင်းရန် ကုမ္ပဏီ ၇ ခုကျန်နေ
ဇွန်လတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် ပုဂ္ဂလိကအာမခံလုပ်ငန်း (၁၂)ခု မှ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းသို့ မတည် ရင်းနှီးငွေ အဖြစ် ပေးသွင်း ရန် ပုဂ္ဂလိက အာမခံလုပ်ငန်း (၇)ခု ကျန်ရှိနေပြီး ၎င်းကုမ္ပဏီ (၇)ခုအား မေလတွင် နောက် ဆုံး ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ ဦးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအေးမင်း သိန်း က ပြောသည်။
““ပုဂ္ဂလိက အာမခံတွေ အား လုံး အရစ်ကျနဲ့သွင်းလို့မရဘူး။ အလုံးအရင်းနဲ့ အပြည့်သွင်းရမှာ။ အထွေထွေ အာမ ခံ အတွက်က ကျပ်သန်းပေါင်း (၄၆၀၀)နဲ့ အထက်အာမခံအတွက်က သန်း (၆၀၀၀)သွင်းရမှာမို့လို့ သူတို့ ဘာ သာသူတို့ ချိန်ဆနေကြတာပေါ့။ အဘတို့ကလည်း ဘယ်နေ့ဘယ် ရက်သွင်းရမယ်လို့ ပြောလို့ ရပါ တယ်။ အဲ့လို ပြောလိုက်ရင် ဈေး ကွက်ထဲမှာ ဥပမာ (၄၆၀၀၀) (၁၀)ဦးထွက်သွားမယ်ဆိုရင် သိန်း ပေါင်း (၄၆၀၀၀၀)ဖြစ်သွားခဲ့ရင် ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကုန်စည်ငွေ ရေးကြေးရေး လည်ပတ်မှုမှာ နည်းနည်း အထိ အခိုက်ဖြစ်နိုင် တယ်။ ဒါကြောင့် အဘတို့က မပြောဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့သိ တယ်။ အဘတို့ Limit လေးတွေ သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်။ အခု ဆိုရင် မေရယ်၊ ဇွန်ရယ်(၂)လပဲ ကျန်တော့တယ်။ မေလမှာ နောက်ဆုံး အချိန်ရောက်နေပြီ။ ဒီ လထဲမှာ သူတို့သွင်းကိုသွင်းရမှာ”” ဟု ၎င်းင်းကပြောသည်။
အဆိုပါ ပုဂ္ဂ လိက အာမခံ လုပ် ငန်း(၇)မှာFirst National Issuenesscom ၊ AR Myanmar Issuenesscom ၊ IKPZ Intranational Kanbawza ၊ Pillar of Truth၊ Effecient Fortune Intranational ၊ Young Global Issuenesscom ၊ Global world တို့ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက် လက်ပြောသည်။
From: The Hot News
Posted by drmyochit Monday, April 29, 2013, under သတင်းများ | 1 comment
(ဖြားယောင်းခြင်း ခံရသော ကလေးမလေး)
ကိုအောင်အောင် ဦးဟာ မျိုးချစ် လူငယ် တစ်ဦးပါ။တက္ကစီ မောင်းသည့် ကား ဆရာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၈-၃-၂၀၁၃ ရက်နေ့၊ ညနေ(၆း၃၀) နာရီခန့်မှာ ထူးခြားတဲ့ စုံတွဲ တစ်တွဲကို လိုက်ပို့ ခွင့် ရခဲ့ပါ တယ်။ တောင် ဥက္ကလာ စာတိုက်မှတ် တိုင်မှာ တင်ဆောင်လာ ခဲ့တာပါ။
အမျိုးသားဖြစ် သူက အသက် (၄၂)နှစ် အရွယ် မုဆိတ် ပါသူ ဖြစ်ပြီး၊ အမျိုး သမီး လေးက ဆယ်တန်း ကျောင်းသူ အရွယ်လေး ပါ။ ကားနောက် ခန်းမှာ လိုက်ပါ လာကြပြီး၊ ခပ် ခွာခွာထိုင် လိုက် လာ တာဖြစ်လို့ ပထမတော့ စိတ်မဝင် စားမိပါဘူး။
အခြေ အနေကို အကဲခတ်ရင်း လိုက်လာတဲ့ ဦး မုဆိတ်က တာမွေ အရောက်မှာ ကလေးမလေးကို စဖက် တာပါ။ အသက် အရွယ်လည်း မမျှ အပျော် အပျက် ပုံစံ မျိုးလည်း မဟုတ် မိခင် ဖခင် သား သမီး ပုံစံလေး ကို ဒီမုဆိတ်ကြီးက ပွေ့ဖက် ကိုင် တွယ်ပြီး၊ လိုက်လာ တာကို ကိုအောင်အောင်ဦး ရင်ထဲ နာကျင်စွာ ခံစားနေ မိတာပါ။
ခရီးသည် စုံတွဲက မင်္ဂလာတောင် ညွန့်မှာ ဆင်းပါ တယ်။ ပန်းသေး ခေါက်ဆွဲ ဆိုင်ထဲ ဝင်သွား ကြပါတယ်။ ကိုအောင်အောင် ဦးက ပြန်ချင်ယောင် ဆောင်ပြီးစောင့် ကြည့်ပါတယ်။ မိနစ် (၄၀) ဝန်းကျင်ခန့်မှာ ပြန်ထွက် လာပြီး၊ တက္ကစီနှင့် ထွက် ခွာသွားကြ ပါတယ်။ ကိုအောင်အောင်ဦးက နောက်ယောင်ခံ လိုက်လာ ခဲ့ပါတယ်။ တောင် ဥက္ကလာ စာတိုက် မှတ်တိုင်မှာ ကောင်မလေးကို ချထားခဲ့ပြီး၊ ဦးမုဆိတ်က တက္ကစီနှင့် ဆက်ထွက် သွားပါတယ်။
ကိုအောင်အောင်ဦး က အဖော်ပါ လာတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ကလေးမလေးထံ ချထားခဲ့ပြီး၊ ဦးမု ဆိတ်ကား ကို ကျော် တက်ကာ ရှေ့မှ ပိတ်ရပ်လိုက် ပါတယ်။ကားပေါ်မှ ဆင်းလာပြီး၊ “ဟေ့လူ ကောင်မလေးကို ဘာလုပ် တာလဲ”ဟု မေးလိုက်ရာ ဦးမုဆိတ်က ထွက်ပြေး ပါတယ်။ ကိုအောင်အောင် ဦးက လိုက် ဖမ်းပြီး၊ ထိုးကြိတ် ပစ်ပါတယ်။ လူတွေ ဝိုင်းအုံ လာတဲ့ အခါ အဓိ ကရုဏ်း ဖြစ်မှာ စိုးလို့ အကျိုး အကြောင်း ပြောပြပြီး ဦးမု ဆိတ်ရော ကောင်မလေး ကိုပါ ကားပေါ် တင်ခေါ် လာကာ တောင် ဥက္ကလာ ရဲစခန်းကို လိုက် ပို့ ပါတယ်။
လမ်းမှာ ဦးမု ဆိတ်က ကောင်မလေးကို တိုးတိုး တိတ်တိတ် သင်ကြား လာတာက “အသက် (၁၈)နှစ် ရှိပြီ လို့ပြော။ လင်မယား လို့ပြော”ဆိုတာ ပါဘဲ။
ရဲစခန်းရောက်တော့ အလှည့်ကျ တာဝန်မှူးက ဘာတော်လဲမေးရာ ကောင်မလေးက “ကျွန်မယောက်ျား ပါ”လို့ ဖြေပါတယ်။ (၁၈)နှ စ်ပြည့်ပြီး ပါပြီလို့ ဖြေပါတယ်။
ရဲက ဘာမှ လုပ်လို့ မရကြောင်း တက္ကစီ ဆရာကို ပြောပါ တယ်။ တက္ကစီ ဆရာက မိဘတွေခေါ်ပြီး စစ်မေး ဖို့ပြော ရာ တာဝန်မှူးက ဖုန်းဆက်ပေး ပါတယ်။ ဖုန်းဆက်ပြီး နောက် မိဘတွေ လိုက်လာ နေပါပြီ- ဆိုပြီး ကားဆရာ ကို ပြန်ခိုင်း ပါတယ်။ ကားဆရာက မိဘတွေ ရောက်လာမှ ပြန်မယ် ပြောတဲ့ အခါ တာဝန် မှူးက “ဘာလဲ အဓိ ကရုဏ်း ဖြစ်ချင် လို့လား”လို့ မေးပါတယ်။
ဒါနဲ့ ကားဆရာ ကိုအောင်အောင်ဦးက ရဲစခန်း ပတ်ဝန်း ကျင်မှာသူ့ ဖုန်းနံ ပါတ်ပေး ခဲ့ပြီး မှာကြား ခဲ့ပါတယ်။ ကိုအောင်အောင်ဦး ပြန်သွား တဲ့အခါ တာဝန်မှူး ကကြံ့ဖွံ့- ကိုသိန်းထိုက်ကို ခေါ်ပြီး ကလေးမလေးကို ပြန်ပို့ခိုင်း လိုက်ပါတယ်။ ကိုသိန်း ထိုက်က လမ်းထိပ် လိုက်ပို့ ပေးပြီး ပြန်လာခဲ့ ပါတယ်။ လမ်းထိပ်ရေ က်ေတော့ အစ်မဖြစ်သူ မမေချိုဦး ကကောင်မလေး ကို စိုးရိမ်တကြီး စောင့်နေ တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ည (၉း၃၀) နာရီ ရှိပါပြီ။
ည(၁၀း၃၀)နာရီမှာကိုသိန်းထိုက် ကောင်မလေး အိမ်ကို ပြန်ရောက် လာပါတယ်။ ကောင်မလေးက ရဲစခန်းမှာ လိပ်စာ လွဲပြီးပေးခဲ့ လို့ ရပ်ကွက် ရုံးမှာ ဝင်စုံ စမ်းပြီး လိုက် လာခြင်း ဖြစ် ပါတယ်။
ကို သိန်းထိုက် ကကောင်မလေးရဲ့ အစ် ကိုဖြစ် သူ ဆိုက်ကား ဆရာ အောင်မြင့်မြတ် ကို ရပ်ကွက် ရုံးမှာ ခေါ်တွေ့ ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်ဦး(၅၆)နှစ်ကို ခေါ်တွေ့ ပါတယ်။ ဖခင် ဦးခင်မောင်ဦး ကတရား စွဲချင်ကြောင်း ပြောရာ နောက် တနေ့မနက် (၇း၀၀)နာရီ လာခဲ့ဖို့ ချိန်းလိုက်ပါ တယ်။
၁၉-၃-၂၀၁၃မနက် (၇း၀၀)နာရီမှာ ဒုရဲအုပ် မျိုးအောင် ရောက်လာပါတယ်။ ကောင်မလေးတို့ သားအဖကို ရပ်ကွက် ရုံးခေါ်ပြီး(၁၀း၀၀)နာရီထိ စကားပြော ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် ရဲစခန်းကို ခေါ်သွားပါတယ်။
စခန်းမှူး က စာအုပ်ကြီး ဖက်ပြပြီး “စခန်းမှာ တိုင်ချက် ဖွင့်လို့ ရတဲ့ အမှု မဟုတ်ဘူး။ တရား ရုံးကို ဦး တိုက်လျှောက် ရမှာ မနက်ဖြန် လာခဲ့”လို့ မှာ လိုက်ပါတယ်။
၂၀-၃-၂၀၁၃ရက်နေ့မှာ ကောင်မလေးရဲ့ဖအေက စခန်း မသွားတော့ ပါဘူး။ စခန်းက လူလွှတ်ပြီး ခဏခဏ လာခေါ် ပါတယ်။ကောင်မလေး နေမကောင်း လို့ အကြောင်းပြပြီး မသွား ကြတာပါ။ ရဲစခန်းက အခင်းဖြစ် တဲ့နေ့မှာ မိဘတွေ ကို အသိမပေး အကြောင်း မကြား တာရယ်၊ ကောင်မလေးကို မိဘထံ လာမ အပ်ဘဲ ကြံ့ဖွံ့- ကိုသိန်းထိုက်နှင့် ထည့်လွှတ် လိုက်တာရယ်၊ ကြံ့ဖွံ့- ကိုသိန်းထိုက်က လမ်းထိပ်မှာ ပစ်ထားခဲ့ တာရယ်ကြောင့် ရဲကို အယုံအကြည် မရှိတော့လို့ မသွားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၂၂-၃-၂၀၁၃နေ့မှာ ရဲစခန်းက ထပ်မံ လာခေါ် ပါတယ်။ ကောင်မလေးတို့ မိသားစု လိုက်သွား ပါတယ်။ အစ် မဖြစ်သူ မမေ ချိုဦးက အခင်းဖြစ်တဲ့ညက မိဘအုပ်ထိန်းသူထံ အကြောင်းမကြားတဲ့ကိစ္စမေးရာ စခန်းမှူးက မမေ ချိုဦးကို ငေါက်ဆူ ဆူပါတယ်။
မိဘတွေက သမီးဖြစ်သူရဲ့ ဘဝကို ဖျက်ဆီး ခဲ့တဲ့ ဦး မုဆိတ်ကို တရား စွဲဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် ကောင် မလေးက မုဆိတ်နာ ကျနေ ပါတယ်။ ဒါကို ကိုအောင်အောင်ဦး က တောင်ဒဂုံ ရှိ ရွှေဝါဝင်း ကျောင်းတိုက် ထိကောင်မလေး မိသားစုကို ခေါ်သွားပြီး ကောင်မလေးကို ဆုံးမပေးဖို့ အပ်နှံရင်း ငိုယိုလျှောက် ထားခဲ့ပါတယ် ။ဆရာတော်များ က ဆုံးမသြဝါဒပေးကြပါတယ်။
ဒါနဲ့တင် မလုံလောက်သေးလို့ သာကေတမှ အရှင် ပညာ ဓဇတို့ ဖွဲ့စည်း ထားတဲ့(၉၆၉) ရဟန်းတော် များထံ ထပ် မံလျှောက် ထားခဲ့ပါတယ်။ (၉၆၉)ရဟန်း ပျိုများက ကောင်မလေး မိသားစုကို ငွေကျပ် တစ်သိန်း ထောက် ပံ့ပေးပြီး ဆုံးမ လမ်းညွှန်ခဲ့ ပါတယ်။ ရဟန်းသံ ဃာများရဲ့ ဆုံး မပြုပြင်မှုနှင့် ကိုအောင်အောင် ဦးရဲ့ မေတ္တာစေတ နာတွေကြောင့် ကောင်မလေးက သူ့ဘဝ မှန်ကို ထုတ်ဖော်ပြော ပြခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ မုဆိတ်နာ ပျော က်သွား ခဲ့ပါပြီ။
ကောင်မလေးက ငါးတန်း ထိဘဲ ကျောင်းနေ ခဲ့ရ သူပါ။ ဖအေက ဆိုက် ကားဆရာ၊ မွေးချင်းက (၉)ယောက် တောင်ဖြစ်လို့ ကျောင်းထွက်ပြီး စက်ချုပ် သင်ပါတယ်။ တောင်ဥက္ကလာ(၇)ရပ်ကွက်၊ (၂၂)လမ်း၊ ဦးစောလွင်(ခ) အရွတ်+ဒေါ်ဝါဝါရွှေ (ခရစ်ယာန်မှ အစ္စလာမ်ပြောင်းလဲခံယူ)တို့ အိမ်မှာ စက်ချုပ် သင်တာပါ။ (၁၃)နှစ် အရွယ်မှာ သင်ကြားရာ၊ (၁၄)နှစ် အရွယ်မှာ အရွတ်တို့ အိမ်မှာဘဲ ပိုက်ဆံ အိပ်တွေ ကိုနေ့စား ချုပ်လုပ် ခွင့် ရခဲ့ ပါတယ်။
(၁၅)နှစ် အရွယ်၂၀၁၂-ဧပြီလမှာ ချစ်ရေးဆို ခံရပြီး၊ ရုပ်ရှင် ကြည့်ရင်း အဖြေ ပေးမိ ခဲ့တာပါ။ ရည်းစား ဖြစ်ပြီး လပိုင်း အကြာမှာ တောင်သုံး လုံးရှိ တည်းခိုခန်း တစ်ခုသို့ ခေါ် သွားပြီး စည်းရုံးခံ ရတာ ပါ။ “တစ်ခါ တည်း ပါ” “ငါ့ကို မယုံဘူးလား” “လက်ထပ် မှာပါ”လို့ ပြောပြီး မုဆိတ်မွှေးတွေ နဲ့ ရွှေလည်တိုင်ကိုပွ တ်သပ်ချော့ မြူရင်း ပြန်ခွင့် တောင်းတာ မပေးဘဲ၊ လက်ဖျံနှစ်ဖက်ကို မုဆိတ် လက်နှစ် ဖက်နဲ့ ချုပ်ကိုင် ထားပြီး အနိုင်ယူ လိုက်တာ ပါ။ ကောင်မလေးက ခြေကန် ရုန်းကန် ခဲ့ပေ မယ့် သမင်နဲ့ကျား အင်အား ချင်းက တစ်ခြား စီဖြစ် တာမို့ အားမတန်မာန် လျော့ခဲ့တာပါ။
အဲဒီနောက်လေးငါးခါလောက် တည်းခိုခန်းမှာ အတူနေခဲ့ကြပါတယ်။
ဦးမုဆိတ်(ခ) အရွတ် အိမ်မှာ အလုပ် သမ(၆)ယောက် ရှိပြီး၊ မူ ဆလင် မလေးတွေက သုံးယောက်၊ ဗမာ မလေး တွေက သုံး ယောက်ဖြစ် ပါတယ်။ အလုပ်ရုံ ဆိုပေမယ့် အပ်ချုပ် စက်လေးလုံး သာရှိပြီး ကောင်မလေး ကို စက်တစ်လုံး ဝယ်ပေးထား တာလေးလပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ကောင်မလေးက အိမ်မှာပဲ ဦးမု ဆိတ်အပ်တဲ့ ပိုက်ဆံ အိပ်တွေကို ချုပ်ရပြီး၊ ဦးမုဆိတ်က ဖုန်းဆက် ချိန်းရင် စာတိုက် မှတ်တိုင်မှာ ဆုံကြကာ ဦးမုဆိတ်နောက် လိုက်သွား တတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကိုအောင်အောင်ဦး ကားကို ငှားစီး တဲ့နေ့မှာတော့ လင် မယားပုံစံနဲ့ မနေ ခဲ့ပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ကိုရ်အန်ကျမ်း မှာမပါဘဲ မုဆိတ် ထားကြတာ မုဆိတ်ကို အမြတ် တနိုးနဲ့ တန်ဖိုး ထားကြ တာဟာ မုဆိတ် ထားမှ ကုသိုလ် ရတယ် ဆိုတဲ့ အယူ ရှိကြ လို့တင် မဟုတ် ပါဘူး။ ကာမဂုဏ် စွဲမက်အောင် မုဆိတ်စွဲဆေး ဖော်စပ်ဖို့ ရည်ရွယ် တာ အဓိကလို့ မုဆ်ိတ်မ ထားတဲ့ မူဆလင်တွေက ဖွင့်ဟခဲ့ ဖူးပါတယ်။ အချို့ ဗလီတွေ မှာ မုဆိတ် ထားတာဟာ ငါးကြိမ် ဝတ်ပြုတာ ထက် ကုသိုလ် ရတယ်လို့ ရေးသား ထားပြီး မုဆိတ် မထားရင် (၂၄)နာရီ အကု သိုလ်ဖြစ် တယ်။ ဂျဟနဟ်(ငရဲ)ကျတယ်လို့ ရေးသား ထားလို့ မုဆိတ် မထားတဲ့ မူဆ လင်များနဲ့ အငြင်းပွား ကြတာတွေတောင် ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီမုဆိတ်တွေနဲ့ ခြေဆုံး ခေါင်းဆုံး ပွတ်ကာ သပ်ကာ ဖျောဖြေခံ ရပြီဆိုရင် အဲ့ဒီ မိန်း ကလေးဟာ ဘုရား မျက်နှာ မမြင်တော့ဘဲ ကုလား မျက်နှာပဲ မြင်ယောင် မိတော့တာ။ တရား စကား နား မဝင်ဘဲ ကုလား စကားပဲ တွင်တွင်ပြော တတ်တာ။ နောက်ဆုံး အသက်ပေး ရပေးရ ဘုရား ပုံကို ခြေနဲ့ နှင်း ရနှင်းရ။ စစ်သုံ့ ပန်းတွေ လို တစ်သက်လုံး အကျဉ်းကျ ခံရခံရ အရာရာကို ရင်ဆိုင် ရဲတဲ့ ပုံစံမျိုး ရောက်ရှိ သွားပြီး မုဆိတ်မှ မုဆိတ် ဖြစ်သွား တတ်တယ် ဆိုတာ ကိုတော့ သတိထား ရတော့ မယ်နော်။ မုဆိတ် အန္တရာယ် ကလည်း အမှန် တကယ် ကျရောက် နေပြီ မဟုတ်လား။
ကိုအောင်အောင်ဦး က သာကေတ(၉၆၉) လုပုဂ္ဂိုလ်များ အဖွဲ့ရဲ့ အကူ အညီနဲ့ Youth Legal Clinic (ရှေ့နေများ ကွန်ယက် စမ်းချောင်း) ကို ဆက်သွယ် ခဲ့ရာ ရှေ့နေ ကွန်ယက်က တရား စွဲဖို့ ပြင်ဆင် နေပါပြီ။
ကိုအောင်အောင်ဦး ဟာ အိမ်ထောင်သည် ကလေး တစ်ယောက် ဖခင်ဖြစ်ပြီး သွေးမတော် သားမစပ်ဘဲ မြန်မာ သမီးပျိုလေး တစ်ယောက်ကို သူစွမ်းနိုင် သလောက် ကူညီ တာကို ချီးကျူးရ မယ်နော်။ သူသာ မကယ် ခဲ့ရင် စားနေကြ ကြောင်ပါးက သမီး အရွယ် လေးကို မွေးပြီး စားနေ ဦးမှာ ပဲ။ အသက် (၁၈)နှစ်ပြည့် ရင် လက်ထပ် ယူမယ် လို့ ပေးထား တဲ့ကတိ အတိုင်း မယား ငယ်အဖြစ် တရားဝင် ယူဖြစ် ခဲ့ရင် လည်း ကောင်မလေး က အစ္စလာမ် ဘာသာ ထဲပဲ ဝင်ရတော့ မှာပါ။ လက်ရှိမ ယားကြီး ဒေါ်ဝါဝါ ရွှေတောင် မှ ဦးမုဆိတ် (ခ) အရွတ်နဲ့ ညားမှ ခရိယာန် ဘာသာမှ အစ္စလာမ်ဘာ သာထဲ ပြောင်းခဲ့ ရတယ် မဟုတ်လား။
(ကောင်မလေးမိသားစုကို ဦးဝီရသူက ငွေ တစ်သိန်းကျပ် ထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။)
From: Wira Thu
လက်ပံတောင်း ဆူပူသူများကို အမြန် ဖမ်းဆီးရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် ပြောဆိုခဲ့ဖူး
လက်ပံတောင်း အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ပိုင်း စီမံကိန်း တည်ရှိရာ ကျေးရွာများသို့ ဒေါ် အောင်ဆန်း စုကြည် သွားရောက်တွေ့ဆုံစဉ်အတွင်း ဒေသခံ မဟုတ်ဘဲ ရွာတွင်း အခိုင်အမာ စခန်းချ နေထိုင်သည့် ဟန် ၀င်း အောင် တို့ လူအုပ်စုကို တရားဥပဒေနှင့် အညီ ဖမ်းဆီးသင့်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိ သူ များ ကို ပြောကြားခဲ့ဖူးသည် ဟု သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ဥပဒေ အတိုင်းအရေးယူရမှာပဲ။ အခုက ဒေသ ခံတွေ ကို မြှောက်ပင့်ပြီး ဆူ ပူအောင် လုပ်နေတာ။ ဟု အန်အယ်ဒီ ပါတီဝင် များနှ င့် ရဲတပ်ဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူများ အရှေ့တွင် ပြောကြား ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အတိအကျ မပြောနိုင်သော သတင်းများအရ ဟန်ဝင်းအောင်နှင့် အပေါင်း အပါ အုပ်စု အား ဖမ်းဆီးရန် အမိန့် ပေးခဲ့သော်လည်း ဖမ်းဆီးခြင်း မပြုခဲ့သည့် ခရိုင်ရဲမှူးကြီး အရေးယူခံရဖွယ် ရှိသည် ဟု ဆိုသည်။ ပြည်တွင်းနေ ပြည်သူများမှလည်း တရားစွဲ ထောင်ချနိုင်သည့် ပြစ်မှုပေါင်းများစွာ ကျူးလွန်ပြီး ရွာ သား များကို နောက်ကွယ်မှ မြှောက်ပင့်သွေးထိုးနေသည့် ထိုအုပ်စု တစ်စုအား အရေးယူ ဖမ်းဆီးခြင်း မရှိသည့် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ အပေါ် အားမလို အားမရ ဖြစ်လျှက် ရှိသည်။
နောက်ဆုံး သတင်းများအရ ဟန်ဝင်းအောင် နှင့် အဖွဲ့သည် အခိုင်အမာ စခန်း ချ ထားသည့် ရွာများအတွင်း လှည့် လည် ပုန်းအောင်းလျှက် ရှိပြီး ပါတီ အဖွဲ့ အ စည်းများ၊ ဒေသခံများနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ပူးပေါင်း ကာ ဖမ်း ဆီးနိုင်ေ ရး ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိသည်။
ဟန်ဝင်းအောင်နှင့် အဖွဲ့အား အလိုရှိသည် ကြော်ငြာများ ကပ်၍ ဖမ်းဆီးပြီ
လက်ပံတောင်း ဒေသတွင် ရွာသူရွာသားများ အကြား သွေးထိုးမြှောက်ပင့်ကာ ဆူပူမှုများ ဖြစ်စေသည့် ဟန် ၀င်းအောင်နှင့် အဖွဲ့အား အလိုရှိသည် ကြော်ငြာများ နေရာအနှံ့ကပ်၍ ဖမ်းဆီးမှု စတင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
အစော ပိုင်း ဝေငှခဲ့သည့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ကြေညာချက်၌ အမှုဖွင့်ခံရသူများကို သ တင်းပေး တိုင်ကြားရန် ပျက်ကွက် သူများအား ထောင်ဒဏ် ၆ လ အထိ ချမှတ်ခံရနိုင်ကြောင်း၊ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၇၆ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားကြောင်း၊ သေဒဏ်ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူကို လက်ခံထားပါက ၅ နှစ်ထောင် ဒဏ်၊ တစ်ကျွန်း သို့မဟုတ် ၁၀ နှစ် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို လက်ခံထားက ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်အထိ၊ တစ်နှ စ်နှင့် ဆယ်နှစ်အကြား ထောင်ဒဏ်ထိုက်သင့် သူကို လက်ခံထားပါက ပြဋ္ဌာန်းကာလ၏ ၄ ပုံ ၁ ပုံကို အပြစ်ေ ပးနိုင်ကြောင်း ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၁၂ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ဟန်ဝင်းအောင် နှင့် အဖွဲ့သည် အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ ရမည်ဟူသော မက် လုံးဖြင့် ရွာတစ်ရွာအား စည်း ရုံး ထားပြီး အခိုင်အမာ အခြေချ နေထိုင်လျှက် ရှိကြောင်း သိရသည်။ ဆူပူသူများအား ဖမ်းဆီးနိုင်ရေး အ တွက် ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ အား အတိုက်အခံ ပါတီကြီး တစ်ခုမှ အကူအညီ ပေးလျှက် ရှိပြီး ပြည်သူများ ကလည်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိသည်။
၂၀၁၃ ၊ ဧပြီ ၂၈
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့က အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ် ၈ ဦးကို အမှုဖွင့် အရေးယူထားပြီး လက်ခံထား သူတွေ ကို ပါ အရေး ယူမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ယနေ့ ဧပြီ ၂၈ ရက်မှာ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
၁။ ကိုအောင်စိုး (ရန်ကုန်ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကွန်ယက်) အမှု ၁၄ မှု
၂။ ကိုဟန်ဝင်းအောင် (နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကူညီစောင့်ရှောက်ရေး) အမှု ၅ မှု
၃။ ကိုဗထူး (ရန်ကုန်ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကွန်ယက်) အမှု ၉ မှု
၄။ ကိုသောင်းထိုက် (ရန်ကုန် ၀ိဇ္ဇာ သိပ္ပံ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကွန်ယက် ) အမှု ၁၈ မှု
၅။ ကိုသားကြီး (ရန်ကုန်ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကွန်ယက်) အမှု ၆ မှု
၆။ ကိုလတ် (ရန်ကုန်ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကွန်ယက်) အမှု ၈ မှု
၇။ ကိုသော်ဇင် (ရန်ကုန်ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကွန်ယက်) အမှု ၅ မှု
၈။ ကိုသူ (ရန်ကုန်ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကွန်ယက်) အမှု ၁ မှု တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အမှုဖွင့် ထားသူ စာရင်းကို လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီ စီမံကိန်း အနီးက ရွာ ၂၆ ရွာမှာ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် ထာပြီး သတင်းပေးမှု ပျက်ကွက်ရင် လက်ခံထားရင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၇၆ အရ အရေးယူ မယ်လို့ မုံရွာခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးက ပြောပါတယ်။
“ဗုဒ္ဓဘာသာမိန်းကလေးတိုင်း ရှောင်ကြဉ်ရမည့် အဆီကိုစား အသားကိုမျိုမည့်သူများ”
လူမျိုးခြား ဘာသာခြား တွေဟာ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ မြန်မာ အမျိုး သမီး တွေကို ရမယ်ဆိုရင် ချဉ်ချဉ် တူးတူး မူးပြီး ရောဆိုတဲ့ လူသားတွေ ပါပဲ။ ဒါကြောင့် မို့ မြန်မာ အမျိုး သမီးလေး များကို ရမယ် ဆိုရင် အနု နည်းနဲ့ တစ်ဖုံ၊ အကြမ်းနည်းနဲ့ တစ်မျိုး၊ နောက် ပြီး မာယာ ပရိယာယ်နဲ့ တစ်သွယ် အမျိုးမျိုး ရ အောင် ယူတတ်ကြ ပါတယ်။ အဲသည်လို ရအောင် ယူတဲ့ အခါ မှာလည်း အဆင်းရဲဆုံး မိန်း ကလေး ကနေ အချမ်း သာဆုံး မိန်းကလေး အထိ အလွှာ အ သီးသီး ကနေ ရအောင် ယူ တတ်ကြ ပါတယ်။ ဆင်းရဲတဲ့ မိန်း ကလေးတွေ ကို ငွေရေး ကြေးရေးနဲ့ ဗန်းပြပြီး အမိ ဖမ်း တတ်ကြ သလို ချမ်းသာတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ကိုတော့ မာယာ ပရိယာယ် ဆင်ပြီး အမိ ဖမ်းတတ်ကြ ပါတယ်။
သူတို့ ရဲ့ မာယာ ညွတ်ကွင်း ထဲမှာ အမိဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေဟာ များသောအားဖြင့် ဘယ် လိုမှ ရုန်းထွက် လို့မ ရအောင် ချုပ်ကိုင်ထားကြပါတယ်။ အဲဒီအခါ သူတို့လက်ခုပ်ထဲက ရေဖြစ် သွားပြီ မို့ မှောက်ချင် သလိုမှောက်၊ သွန်ချင်သလို သွန် လုပ်ကြ ပါတော့ တယ်။ လူ မျိုးခြား၊ ဘာသာခြား တွေဟာ မြန်မာ မိန်း ကလေး တွေကို အမိ ဖမ်းကြ တဲ့နေ ရာမှာ အပေါ် ယံနှုတ် ဖျားက ရွှေမှုန်ကြဲပြီး ချိုသလို မြူ သလို ရှိတတ်ကြပေမယ့် အတွင်းနှလုံးသားကတော့ ကျီးအာသီးလို မဲပုတ်ပုတ် ညစ်ထေထေပါပဲ။ မြန်မာ မိန်းကလေး တွေဟာ အများ အားဖြင့် အမျိုးသားရေး အခြေခံစိတ်၊ ဘာသာရေး အခြေခံစိတ် အလွန် နည်း ပါးကြ ပါ တယ်။ ဒါဟာ လူမျိုးခြား ဘာသာ ခြားတွေ အတွက် မဟာ အခွင့် အရေးကြီး သဖွယ် ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ သူတို့ ဟာ ဒီလို အခွင့် အရေး မျိုးကြီး ကို အကွက်ကောင်း အဖြစ် အသုံး ချ နေကြ ပါတယ်။
တစ်ချို့ မြန်မာ မိန်း ကလေး တွေဟာ အပြင် ပန်းက ကြည့် ရင်တော့ အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ်၊ ဘာသာရေး စိတ်ဓာတ်တွေ ပြည့်ပြည့် ဝဝ ရှိနေတယ် လို့ ထင် ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ လက်ထဲရောက် သွားတဲ့ အခါ မှာတော့ သူတို့ရဲ့ ပုံသွင်း မှုကို ခံရ ပါတယ်။ သူတို့က ဒီလိုနေ၊ ဒီလိုစား၊ ဒီလိုဝတ်၊ ဒီဘာသာ ကို ကိုးကွယ် ဆိုရင်လည်း နှစ်ခါ မပြော ရဘူး။ ပြောရင် လည်းယုံ၊ ယုံရင်လည်း ပုံလိုက်ကြ ပါတယ်။ ဒါဟာ အကြီး မား ဆုံး- ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပင်ဖြစ်၏။ တစ်ဘဝတည်းရှုံးတာမဟုတ်ဘဲ တစ်သံသရာလုံးစာအတွက် ရှုံးခြင်း ဖြစ်လေ သောကြောင့် အရှုံးကြီး ရှုံးသည်ဟု ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ဘာကြောင့် ဖြစ်ရ တာ လဲ ဆိုရင် အဓိက အခြေခံ အကြောင်း အရင်းကို စစ်ကြည့် လိုက်တော့ အမျိုး သားရေး အခြေခံ စိတ်၊ ဘာသာရေး အခြေခံ စိတ်ဓာတ် ကောင်းတွေ နည်းပါ မှုတွေ ကြောင့် ပါပဲ။ ဒါကြောင့် မို့လည်း မြန်မာ အမျိုး သမီး လေးတွေ လူမျိုးခြား ဘာသာ ခြားနောက် ကို ဟိုရပ်ကွက်က ပါသွား လိုက်၊ ဒီရပ် ကွက်က ပါသွား လိုက်ဖြစ် နေကြတာ မနည်း တော့ပါဘူး။ သေချာ ဆင်ခြင် သင့်ပါပြီ။ အားလုံး လည်း ဘာသာခြား များရဲ့ ရက် စက်စွာ ညှင်းပန်းနှိပ် စက်မှု များကို ဗီဒီယို ဖိုင်တွေ၊ အင်တာနက် စာမျက်နှာ များ မှာပါ မြင်တွေ့ နေကြ ရပါပြီ။ ဆက်မိုက် နေမည် ဆိုရင်တော့ ကိုယ့် အတွက်နဲ့ ဘာသာ သာသနာ လူမျိုးနဲ့ မိမိရဲ့ မိဘ ဆွေမျိုး ဂုဏ် သိက္ခာ များပါ ပွန်းပဲ့ ပျက်စီး ပါ လိမ့်မယ်။ ဒီလိုသာ များလာ မယ်ဆို ရင် ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ဟာ မြန်မာ မြေပေါ်မှာ ပျောက်ကွယ် သွားပါ လိမ့်မယ်။
အထူး ဂရုစိုက် သတိထား ဆင်ခြင် ကြပါလို့ တိုက်တွန်း ပါရစေ။ နောက်ပြီး လူမျိုးခြား ဘာသာခြားနောက် ပါသွား ကြတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးလေးတွေဟာ တစ်ယောက်အစ တစ်ရာမတော့တဲ့အတွက် ကြာလာရင် အမျိုးသား အန္တရာယ်၊ ဘာသာရေးအန္တရာယ်တွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့ဒီလိုပြောနေရတာလဲဆိုရင် လူမျိုးခြား နောက် ဘာသာခြား နောက်ပါ သွားတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတိုင်းဟာ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့် ဘာသာ တွေရဲ့ အယူကိုစွန့်ပြီး သူတို့လူမျိုး သူတို့ဘာသာနောက်ကို ပါသွားကြလို့ပါပဲ။ ကိုယ့်ဘာသာထဲကိုတော့ တစ်ရာမှာ တစ်ယောက်တောင် ပါမလာပါဘူး။ လူမျိုးခြား ဘာသာခြားနဲ့ ညားလို့ လူမျိုးခြားစိတ်ဓာတ်၊ ဘာသာခြား စိတ်ဓာတ်၊ ပေါက်သွားပြီဆိုရင် မွေးလာတဲ့ ကလေးကအစ ဘာမှစွဲဆောင်စရာ မလိုတော့ဘဲ သူ့အ လိုလို လူမျိုးခြား ဘာသာခြား ဖြစ်သွား တော့ပါပဲ။ စိတ်ဓာတ် ကအစ မြန်မာ စိတ်ဓာတ် မရှိတော့ ပါဘူး။
ဗုဒ္ဓ ဘာသာ မြန်မာ မိန်းကလေး တစ်ယောက် က ဝမ်းနဲ့ လွယ်ပြီး မွေးပေး လိုက်တဲ့ ကလေးဟာ မြန်မာ စိတ်ဓာတ် မရှိဘူး ဆိုရင် လူမျိုး လည်းရှုံး၊ ဘာသာလည်း ဆုံးတော့ တဲ့ အတွက် မြန်မာ တစ်မျိုး သားလုံး အတွက် တော်တော် ကိုပဲ နစ်နာ လွန်းလှ ပါတယ်။ ရင်နာ စရာလည်း ကောင်း ပါတယ်။ မြန်မာ လူမျိုး ဆိုတဲ့ အဆီကိုလည်းစားတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ အသားကိုလည်း မျိုတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးပြော တာဖြစ်ပါ တယ်။ လူမျိုးခြား ဘာသာခြားတွေက မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကို ဟင်းရွတ်ကန်ဇွန်းလို ဈေးပေါပေါနဲ့ ရအောင် ယူကြပေ မယ့် သူတို့ ရင် မှဖြစ်တဲ့ သမီး ပျိုလေး များကိုတော့ စိန်ကောင်း ကျောက်ကောင်း တွေ အလား သိုသို သိပ်သိပ်နဲ့ သိမ်းထား ကြပါ တယ်။ နောက်ပြီး လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြား တွေဟာ သူတို့သွေး သားစစ်စစ် မဟုတ်တဲ့ ကပြား အမျိုး သမီးကို မြန်မာ အမျိုး သားက ယူရင်တောင် အသည်းကို လှန်စွပ်နဲ့ ထိုးသ လို နာတတ်ကြ ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ သူတို့ သမီးပျို တွေနဲ့ မြန်မာ အမျိုး သားတွေနဲ့ ထိတွေ့ခွင့်၊ နီးစပ်ခွင့်၊ ချစ်ကြိုက်ခွင့် မရှိကြ ရအောင် အမျိုးမျိုး ချုပ် ကိုင်ပြီး အိမ်တွင်း ပုန်းခိုင်း ထားကြ ပါတယ်။ အကြောင်း ကိစ္စ ရှိလို့ အပြင်ကို မဖြစ် မနေ ထွက်ရမယ် ဆိုရင်လည်း လုံခြုံမှု ရှိအောင် အပြည့် အဝ အကာ အကွယ် ယူထား ကြ ပါ တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မြန်မာ အမျိုး သားတွေ အေ နနဲ့ လူမျိုးခြား ဘာသာခြား အမျိုး သမီး စစ်စစ် တစ်ယောက် ကို ရအောင်ယူ ဖို့အပထား၊ မြန်မာမ နဲ့ ရတဲ့ ကပြား အမျိုး သမီး ကိုတောင် ရအောင် ယူဖို့ ခဲယဉ်း လှပါတယ်။ ဘယ်လောက် ထိ ခဲယဉ်း လဲဆိုရင် ကိုယ့်ဘက်က မြန်မာ အမျိုး သမီး အယောက် (၁၀၀၀) ပေးလိုက်ရမှ သူတို့ ဘက်က အမျိုး သမီး တစ်ယောက်လေး ကိုတောင် ယူဖို့မ လွယ်ကူ နိုင်လောက်အောင် ထိ ခဲယဉ်း လှပါတယ်။
ဒီ လိုပြော လို့ သူတို့ ကို အပြစ် တင်နေ တာမ ဟုတ် ပါဘူး။ မြန်မာ လူမျိုးတွေ အတု ယူဖို့၊ သင်ခန်း စာယူဖို့၊ သတိထားဆင်ခြင်ဖို့ ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က သူတို့ရဲ့ အဖူးအညွှန့်ဖြစ်တဲ့ အမျိုး သမီးတွေ ကို နှမြော တတ်၊ တွန့်တိုတတ်၊ တန်ဖိုးထားတတ်ရင်၊ မြန်မာလူမျိုးတွေကလည်း မြန်မာ လူမျိုး တို့ရဲ့ အညွှန့် အဖူး ဖြစ်တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကို နှမြောတတ်၊ တွန့်တိုတတ်၊ တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ လိုပါ တယ်။ ဒါဟာ တရားသော နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူမျိုးခြား ဘာသာခြားတွေဟာ သူတို့ အမျိုး သမီးတွေ ကို သူတို့ လူမျိုး၊ သူတို့ဘာသာ၊ လူဦးရေတိုးတက်များပြားဖို့အတွက် ဘယ်လောက်အထိ အရေးပါ အရာ ရောက် တယ် ဆိုတာ ကောင်းကောင်းကြီး နားလည် သဘောပေါက် ထားကြပါ တယ်။ နောက်ပြီး မြန်မာ တစ်မျိုး သားလုံး ကို လူလူချင်းချင်း ဝါးမြိုပြီး ဖုံလွှမ်း ပစ်ဖို့ အတွက် အမျိုး သမီး များဟာ မဟာ လက်နက်ကြီး သဖွယ် ဆိုတာလည်း သိထားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သူတို့ အမျိုးသမီးတွေကို လုံခြုံအောင် ချုပ် ချယ်ပြီး မြန်မာ အမျိုး သမီးတွေ ကိုတော့ ရသလောက် သိမ်း ပိုက်ကြ ပါတယ်။
ဒီလိုမြန်မာ အမျိုး သမီးတွေ ကို ရအောင် ယူခြင်း အားဖြင့် မြန်မာ လူမျိုး တွေရဲ့ အဖူး အညွှန့်များကို ချိုးနှိမ်ပြီး သား ဖြစ်သ လို သူတို့ လူမျိုးတွေရဲ့ အညွှန့် အဖူးအတွက်လည်း အားဖြည့်ပြီး သားဖြစ်သွား ပါတယ်။ တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်ဆိုတာ ဒါမျိုးကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာလူတွေဟာ ဒီလောက် ကလေးသာ နားလည်သဘောပေါက်ထားမယ်ဆိုရင် မိမိတို့ရဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးများကို တန်ဖိုးထား တတ်လာပါ လိမ့်မယ်။ တန်ဖိုးထားတတ်လာတဲ့အခါ လူမျိုးခြား ဘာသာခြားတွေနဲ့ ညားသွားမှာကိုလည်း နှမြော တတ် လာ ပါ လိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း လူမျိုးခြား၊ ဘာသာ ခြားတွေ နဲ့ နီး စပ်ခွင့်၊ ထိတွေ့ခွင့်၊ ချစ်ကြိုက်ခွင့်မရအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ရှောင်တတ် တိမ်းတတ် လာပါ လိမ့်မယ်။ အခုဖြစ်နေတာက အချို့သော ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ မိမိတို့ အနွယ်ဖြစ် တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာ အမျိုး သမီးတွေ ကို အမျိုးသားရေး သတိ၊ ဘာသာရေး အသိတွေနဲ့ အပြည့် အဝ ကာကွယ် ဖို့ နေနေ သာသာ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတောင် လူမျိုးခြား ဘာသာခြားတွေနဲ့ ညားအောင်ကြား က အောင်သွယ်တော် လုပ်ပေး နေကြ တာတွေ ရှိပါတယ်။
ဒါဟာ ဘာလဲ လို့ ဆိုရင် အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ်၊ ခေါင်းပါး၊ ဘာသာရေး အသွင် အပြင်ရဲ့ လက္ခဏာတွေ ကို နားမလည်မှု တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ အမျိုး ပျက်မဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ကို ဘယ်တော့ မှ မလုပ် ပါဘူး။ အောက် တန်းစား စိတ်ဓာတ် ရှိတဲ့လူ၊ စိတ်ပုတ် စိတ်ယုတ် စိတ်ညံ့ရှိကြတဲ့ လူတွေကသာ လုပ်ကြတာပါ။ သားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းမစာ၊ နှမသားချင်း ကိုယ်ချင်း မစာ၊ ခွေးလောက်မှ အသိမရှိ၊ အလွန်အောက်တန်းကျလှပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားသာသနာ၊ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ မြန်မာလူမျိုးမျက်နှာမထောက်ထားဘဲ ငွေမျက်နှာတစ်ခုတည်းကိုကြည့်တဲ့ အောက်တန်းကျလှတဲ့ လုပ်ရပ် ပင်ဖြစ် ပါတယ်။ လူကုန်ကူးတာတို့၊ ဘာသာခြားများကို လက်ထပ်စည်းရုံးစေတဲ့ သူများကို ဆို လိုခြင်းဖြစ် ပါတယ်။ ဒီလုပ်ရပ်များဟာ ကိုယ့်ရဲ့မျိုးစေ့ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မီးဖုတ်သကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး၊ ကိုယ့်ခြံ ထဲပေါက် နေ တဲ့ အညွှန့်တလူလူတက်နေတဲ့ သစ်ပင်ငယ်လေး ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရေနွေးပူ၊ အက်ဆစ်နဲ့ ပတ်ဖျန်းပြီး မျိုး တုန်းအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်း ပင်ဖြစ်ပါ တယ်။
မြန်မာ လူမျိုးတိုင်း အောက် တန်းစား စိတ်ဓာတ်တွေ မထားကြဖို့ တောင်းပန်ချင် ပါတယ်။ အိမ်နောက်ဖေး က မီးလောင် တာ အိမ်ရှေ့ ခန်းနဲ့ ဘာမှမ ဆိုင် သလို၊ အိမ်တိုင် တစ်လုံး ခြပုံး တတ်တာ တစ်အိမ်လုံးနဲ့ ဘာမှမ ဆိုင် သလို မနေစေချင်ပါ။ အိမ်နောက်ဖေးကမီးလောင်တာ ဝိုင်းပြီး မငြိမ်းရင် အိမ်ရှေ့ခန်းရော တစ်အိမ် လုံး ကိုပါ အလောင်ခံရတတ်သလို၊ အိမ်တိုင်တစ်လုံး ခြပိုးစားတာကို ပေါ့ပေါ့ ဆဆနေ လိုက်မယ် ဆိုရင် တစ်အိမ် လုံး အကိုက် ခံ ရမှာသေ ချာပါတယ်။ ငါ ကောင်းစား ရင်ပြီးတာပဲ၊ ကျန်တဲ့သူ ဘာဖြစ်ဖြစ် ဆိုတဲ့ စိတ်ထား မျိုး မထားပါနဲ့။ ကိုယ့်ဘာသာဝင် လူမျိုးတစ်ဦးဦးကို အခြားဘာသာခြားများက စော်ကားမော်ကား ရန်စတာမြင်ရင် ကိုယ်နဲ့ သိသည်ဖြစ်စေ၊ မသိသည်ဖြစ်စေ၊ ဝိုင်းဝန်း ကူညီ ရမှာဖြစ်ပါ တယ်။ ငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ ငါ့အမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး လျစ်လျှူမရှုစေချင်ပါ။ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် လို့ဆို လိုက် တာ နဲ့ အား လုံးဟာ မိသားစုပမာဖြစ်နေရပါမယ်။ မမေ့ကြပါနဲ့ သတိရှိကြပါ။ မြန်မာလူမျိုးတိုင်း တစ်အိမ် လုံးမီး မလောင် ခင်၊ တစ်အိမ်လုံး ခြပုံးမတတ်ခင် မြန်မြန်ထက်ထက် ကာကွယ်ကြပါတော့ တိုက်တွန်း လိုက်ရ ပါသည်။
စာဖတ်သူ အားလုံး သက်ရှည် ကျန်းမာ စိတ်ချမ်း သာပြီး လိုရာ ဆန္ဒများ တစ်လုံး တစ်ဝတည်း ပြည့်ဝ ကြပါစေ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆရာဝန် နဲ့ စစ်သားမရှိပဲ လျောက်လှမ်းနိုင်ပြီလား..
ဖွဘုတ်ကြီးပေါ်မှာ ပြည်သူ တွေ အထင်လွဲ ခံရဆုံးကတော့
စစ်သား နဲ့ ဆရာဝန် ထင်မယ် ဆရာဝန်တွေက ပြည်သူတွေကို
ကြင်ကြင် နာနာ ဆေးကုပေးတယ် ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်သော
ဆရာဝန် မကောင်းမှု့ကြောင့် ဂျာနယ်တွေက အစ
ဘယ်လိုဆိုပြီး ဝေဖန်ကြတယ် လေကန်ကြတယ်ပေါ့....
ဒါပေမဲ့ အဖြစ်က (တစ်ယောက်သော ဆရာဝန် ကြောင့်ပါ)
ကဲ စစ်သားတွေကို ကြည့်ရအောင် သူတို့လည်း အတူတူပဲ
ခုကြည့် ဘယ်နေရာမှာ ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်ရောက် ဘယ်သူကူညီတာလဲ
ပြည်သူတွေ ခု ရေလို အပ်တဲ့နေရာတွေ ဘယ်သူကူညီတာလဲ
မိတ္တီလာ မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်နေရာမှာပဲ မီးလောင်လောင်
ဘယ်ဒေသမှာပဲ ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ် စစ်သား မကူညီတာ တစ်ခုမှ မရှိဘူး
(တစ်ချို့ဆို တိုက်ပွဲမှာ အသက်စွန့်ရတယ် )
ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့သော စစ်သား မကောင်းမှု့ကြောင့် (သို့) ဟိုအရင်က
လုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဦးသန်းရွှေ ဦးနေ၀င်းပေါ့
အနည်းငယ်ကြောင့် ခု အချိန်ထိ မျက်မှန်စိမ်းတပ်ပြီး ကြည့်ခံရတယ်
ဒါဆိုရင် မေးမယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်သားနဲ့ ဆရာဝန် မပါပဲ အနာဂတ်ကို
ခဏခဏ ပြောနေကြ စကားလေးပါပဲ တစ်ဦး တစ်ယောက် မကောင်းလို့
ဆရာဝန် တွေက ဘယ်လို ဘယ်ပုံလို့ ပြောရင် တစ်ကယ် စေတနာထားပြီး
ဆေးကုပေးနေတဲ့ ဆရာဝန်တွေက စိတ်တိုကြတယ်
တစ်ယောက်မကောင်းလို့ စစ်သားတွေကို ပြောမယ်ဆိုရင်
အသက်ပေးသွားကြတဲ့ စစ်သားတွေရဲ့ ဇနီး မိသားစုတွေက
အဲတော့ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလုံးကို မပြောပဲ ဖြစ်တဲ့သူကိုပဲ By Name တပ်ပြီး
ရဲရဲ ၀ံ့ဝံ့ ပြောကြရအောင်လားဗျာ...... ခုဟာကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့
ဂျာနယ်တွေကနေ မဟုတ်တာတွေ တင်တဲ့အခါမှာ ပြန်လည် ချေပတဲ့သူ
အားနည်းတော့ ပြည်သူတွေက အမှန်ထင်ကုန်ကြတယ် အဲဒီတော့
ရေးလိုက်တာပါ မှန်တာကို ပြောလို့ မုန်းလည်း မတက်နိုင်ဘူး...
Credit : Nay Min
မန္တလေး၊ ဧပြီ ၂၈။
မန္တလေးမြို့ ဘူတာကြီးတွင် အောက် စင်္ကြန်လမ်း လက်မှတ် သိမ်းဆည်းရေး တာဝန်ခံ တစ်ဦးဖြစ် သူသည် မန္တလေး မှ မြစ်ကြီးနား သို့ သွားရောက် သည့် ခရီးသည်များ အပါအဝင် ဝန်ထမ်းငယ် အချို့နှင့် ဘူတာ ကြီးတွင် လုပ်ကိုင် စားသောက်နေ သူ ဈေးသည် အချို့အား မတရား ကိုယ်ထိ လက်ရောက် နိုင့်ထက် စီးနင်းပြု လုပ်လျက် ရှိနေ၍ တာဝန်ရှိသူများက ယင်းဝန်ထမ်းအား စိစစ်ပေးစေလိုကြောင်း အဆိုပါ ဘူတာ ကြီးမှ ဈေးသည် အချို့နှင့် ဝန်ထမ်းအချို့၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
“ကျွန်မ တို့ ဆိုရင် ဘူတာမှာ စည်းကမ်းမဲ့ရောင်းတဲ့ ဈေးသည်တွေလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုရထား ဆိုက်တဲ့ အချိန်တွေဘဲ ရောင်းတာပါ။ တခြားလုပ်ကိုင် စားသောက်ဖို့ဆိုတာလည်း အဆင် မပြေ လို့ ဒီအလုပ်ကိုဘဲ အပြောအဆိုခံပြီး လုပ်ကိုင်နေရတာပါ။ သူအနေနဲ့ စည်းကမ်းမဲ့ဈေးသည်တွေကို ဖမ်း မယ် ဆိုရင် တာဝန်နဲ့ အညီ ဖမ်းလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားတွေတာ။ ဈေး ရောင်း ပစ္စည်းတွေ ကို ဖျက်ဆီးတာတွေတော့ မလုပ်သင့်ပါဘူး”ဟု ယင်းဘူ တာတွင် ထိုးမုန့်ရောင်းသူ အ မျိုး သမီး တဦးက ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် အဆိုပါတာဝန်ခံသည် စည်းကမ်းမဲ့ဈေးသည်များအား ဖမ်းဆီးရာ၌ လူအများကြားတွင် မဖွယ် မရာ စကားများ ပြောဆိုခြင်းနှင့် ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားခြင်းအား ပြုလုပ်သည် သာမက ဈေးရောင်း ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် အိုးခွက်ပန်း ကန်များအား ရိုက်ခွဲခြင်းများ ပြုလုပ်မှုရှိကြောင်း ဘူတာ၌ ထမင်းရောင်းသူ အမျိုး သား တစ်ဦးက ပြောသည်။
“ကျွန်တော့်ကိုလည်း ဈေးရောင်းလို့ ဖမ်းတုန်းကဆိုရင် ထမင်းအိုးတွေကော ပန်းကန်တွေကော အကုန် ရိုက်ခွဲ တာတွေ လုပ် တယ်။ ရိုးရိုးဖမ်းသလိုမျိုး မဟုတ်ဘူး။ မင့်မဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် ဖမ်းတာ။ ပြီးတော့ သူ့ လက်အောက် က ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း ရာထူးကြီးတယ်ဆိုပြီး နှုတ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ ပြောဆို တာတွေ ရှိတယ်”ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
ထို့ပြင် အဆိုပါဝန်ထမ်းသည် ၎င်းတာဝန်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လက်မှတ် အရောင်းဌာနမှ တာဝန် ရှိသူ များနှင့် ပူးပေါင်းကာ ရထားလက်မှတ်များအား တရားမဝင် ယူဆောင်၍ ရထားဘူတာ အနီးရှိ စားသောက် ဆိုင် အချို့၌ မှောင်ခိုဈေးကွက်သဖွယ် ရောင်းချမှုများ ပြုလုပ်သည့်အတွက် ပုံမှန်လက်မှတ်တစောင်လျှင် ၄၁၅၀ ကျပ်ရှိရာ ၎င်းမှ ယခုအချိန်၌ လက်မှတ်တစောင်လျှင် ရှစ်ထောင်နှုန်းဖြင့် ပြန်လည်ရောင်းချလျက် ရှိကြောင်း မျက်မြင်သိရှိသူများက ပြောကြသည်။
“သူက ဒီရထားလက်မှတ် အရောင်းဌာနကလူတွေနဲ့ပေါင်း မန္တလေး မြစ်ကြီးနား ရထား လက်မှတ်တွေ ကိုထုတ် လက်မှတ် တန်းစီတဲ့ လူအချို့ထဲက အတဲ့ လူတွေကို သူတို့စုရပ် နေရာကိုချိန်းပြီး ရိုးရိုးတန်း တစောင် ကို လ္ဘက်ရည်ဖိုးဆိုပြီး လေးထောင် ငါးထောင်လောက် ပြန်ရောင်းတယ်။ ပြီးရင်လည်း သူပိုင်တဲ့ ကားလို ရထားတွဲတွေက အဆင်မပြေတဲ့ ခရီးသည်တွေကို မဖွယ်မရာတွေ ပြောတာလည်း ရှိတယ်”ဟု ယင်းဘူ တာမှ တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် လတ်မှတ် သိမ်းဆည်းရေး တာဝန်ခံ၏ တစ်နေ့အသုံးစရိတ်သည် နှစ်သောင်းနှင့် အထက် တွင် ရှိကြောင်း သိရပြီး ယင်းသည် တစ်လလျှင် တရားဝင်လစာ ၉သောင်းနှင့် တစ်သိန်းနီးပါးခန့်သာ ရ ရှိသောကြောင့် အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းအား သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက စိစစ်အရေးယူပေးစေလိုကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းအနေဖြင့် ယခုအပြုအမူများကဲ့သို့ ဆက်လက် ပြုလုပ်သွားမည် ဆိုပါက နောက် တချိန် တွင် မဖြစ်သင့်သည့် ပြဿ နာများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ကို စိုးရိမ်နေရကြောင်း အဆိုပါဝန်ထမ်းနှင့်နီးစပ်သူ တစ်ဦး ၏ ပြောကြား ချက် အရ သိရသည်။
ခိုးဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေအကြောင်းကို သမ္မဦးသိန်းစိန်က အမေရိကန်မှာ နိုင်ငံ တကာ သိအောင် ပြောကြားမည်
သမ္မတ ဦးသိန်း စိန်ရဲ့ အမေ ရိကန် ခရီးမှာ သမ္မ တရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေး ဆောင်ရွက် ချက်တွေ ကို နိုင်ငံ တကာ သိ အောင် ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွား မှာဖြစ်ပြီး ရိုဟင်ဂျာကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့လဲ ရှင်း လင်း ပြော ကြား သွားဖို့ ရှိတယ် လို့ သမ္မ တရုံး က ပြောပါတယ်။
စက် တင်ဘာ ၂၄ရက်က စတင်လိုက်တဲ့ သမ္မတရဲ့ အမေ ၇ိကန် တစ်ပတ်ကြာခရီးစဉ်ထဲ အဓိက ဘာတွေ လုပ်ဆောင် သွားဖို့ ရှိလဲလို့ ဒီဗွီဘီက ဆက် သွယ်မေးမြန်းရာမှာ သမ္မတရုံးညွှန်မှူး ဦးဇော်ဌေးက ခုလိုထုတ် ဖော်ပြောဆို လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
အထူး သဖြင့်တော့ မြန်မာပြည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းတွေ ဘာတွေလုပ်နေတယ်။ ဘာတွေ ဆက် လုပ် သွားမယ်၊ အခက်အခဲတွေ စိမ်ခေါ်မှုတွေက ဘာတွေရှိနေတယ်၊ အဲ့ဒီအတွက် နိုင်ငံတကာက ထောက် ပံ့ကူ ညီမှု ဘာတွေ လိုအပ်နေတယ် ဆိုတာတွေ သမ္မတအနေနဲ့ထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားဖို့ရှိတယ်လို့လဲ ပြောပါ တယ်။
သမ္မ တဦး သိန်းစိန်ရဲ့ အမေရိ ကား ခရီးစဉ်မှာ အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရတ်အိုဘားမားနဲ့ တွေ့ဖို့ရှိ မရှိ ကတော့ မသိ ရသေး ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကုလသမဂ အထွေထွေအတွင်း ရေး မှုးချုပ် ဘန်ကီမွန်း၊ အမေရိ ကန်နိုင် ငံခြား ရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန်၊ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ယင်လပ်ရှင် နာဝပ်၊ အမေ ရိကန်နိုင် ငံခြားရေး မူဝါပိုင်းက ဟင်နရီကစ်ဆင်းဂျား၊ တခါ ဥရောပသမဂ အီးယူထိပ်တန်းေ ခါင်း ဆောင်တွေနဲ့ အမေ ရိကန် ထိပ်တန်းစီးပွား ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ တွေ့ ဖို့ ရှိတယ်လို့ သမ္မတရုံးကပြော ပါတယ်။
ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့ နံနက်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝတ်စုံနှင့် လူငယ်တစ်ဦး မိတ္တိ လာ ပဋိ ပက္ခ ဖြစ်ပွား ပုံများပါ ၀င်သော ဗွီဒီ ယိုခွေများ ရောင်းချနေ သည် ကိုတွေ့ ရှိရ သဖြင့် ကျောက် တံတားမြို့ နယ်မှ အဖွဲ့ချုပ် ၀င်များ က စုံစမ်း မေးမြန်းခဲ့သည်။
ထို NLD အဖွဲ့ဝင် မဟုတ်ဘဲ ပါတီဝင်မဟုတ်ဘဲ ပါတီဝတ်စုံကို ၀တ်ဆင်ထားသော လူငယ် တစ်ဦးသာ ဖြစ်ကြောင်း မြောက် ဥက္က လာ ပမြို့နယ် တွင်နေထိုင်သူ ဇော်မင်းထွန်းဖြစ်ကြောင်း သိသိရှိရသည်။
ထို လူငယ် အား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ မည်သို့ ဆက်လက် အရေးယူ ဆောင်ရွက် မည်ကို ကျောက် တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်း ခရိုင်နှင့် ရန်ကုန် တိုင်း တာဝန် ရှိသူ များက အနီးကပ် စောင့်ကြည့် လျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။